မြန်မာနိုင်ငံတွင်အသုံးပြုနေသော Internet Connection များအကြောင်း!!! - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင်အသုံးပြုနေသော Internet Connection မျƞ
အားလုံးအတွက် ဗဟုသုတရအောင် နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Internet Connection တွေအကြောင်းကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီပို့စ်လေးကိုရေးဖြစ်တာပါ။ အားလုံးလဲသိပြီးသားဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မှာပါ။ တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Connection က ဘာအမျိုးအစားတွေရှိတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ဗဟုသုတလေး ဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ပါ။ Internet Connection တွေအကြောင်းကိုလဲ တစ်နေရာတည်းမှာ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖတ်လို့ရအောင် ပုံလေးတွေ၊ စာလေးတွေနဲ့ တတ်နိုင်သလောက် အသေးစိတ်လေး ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ မှားနေတဲ့အချက်အလက်တွေ၊ နဲ့အခြားကြည့်မရတဲ့ အချက်အလက်တွေရှိရင် နားလည်ခွင့်လွှတ်ပြီးတော့ သည်းခံပေးကြပါခင်ဗျာ။(ဒါကတော့ နိဒါန်းပေါ့ဗျာ။ . . . . )
1.	Dial Up Connection (Dialup Connection မှာနောက်တစ်မျိုး Internet & E-mail Dial up Service ဆိုတာလဲရှိပါတယ်။)
2.	iPSTAR Connection
3.	Broadband Wireless Local Loop (WLL Connection လို့ခေါ်သလို၊ Broadband connection လိုလဲခေါ်ပါတယ်။)
4.	ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) Broad Band Connection
5.	ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line)2Broadband Connection
6.	ADSL 2+ (Asynchronous Digital Subscriber Line) )Broadband Connection
7.	WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) Connection
8.	Wi-Fi Wireless Connection တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်က Internet Connection အမျိုးအစားအားလုံးကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး (MPT: Ministry of Post and Telecommunication) နဲ့ Bagan Net တို့ကနေ ISP (Internet Service Provider) အဖြစ်အသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အသုံးပြုပုံနဲ့ အခြား သိသင့်တာတွေဆက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်။
Desktop Computer (or) Laptop နဲ့ Phone Line ရှိပြီဆိုတာနဲ့ Modem ကိုအရင်ဆုံးရှာရပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့ Modem လိုအပ်လဲဆိုရင်တော့ Computer ကနေနားလည်လက်ခံတဲ့ Digital Data တွေကို Analog data (အသံလိုမျိုး) အဖြစ်ပြောင်းပေးမယ့် ကြားခံပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ Modem ကနေ Analog data တွေကို ဖုန်းလိုင်းကနေတဆင့် အခြား Modem ကို ရောက်သွားမယ်။ ပြီးတော့အခြား Modem ကနေ မိမိတို့ကွန်ပြူတာတွေဆီကို Digital data အဖြစ်ပြန်လဲပေးပို့ပေးမယ့် အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Modem ရဲ့ Speed ကိုတော့ Kbps (Kilo Bit Per Second)နဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်။ Modem ပစ္စည်းဝယ်တိုင်း သူတို့ရဲ့ နံမည်အမျိုးအစားပြီးရင် Data ပို့လွှတ်နိုင်တဲ့ Speed (52Kbps; 56Kbps ဆိုပြီးတော့)ကို ဖော်ပြထားတတ်ကြပါတယ်။ Desktop မှာဆိုရင်တော့ Modem ကိုတပ်ဆင် အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Modem ကတော့ အမျိုးအစားအနေနဲ့ Internal Modem နဲ့ External Modem ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Internal Modem ကတော့ ကွန်ပြူတာအတွင်းထဲမှာ PCI Expansion Slot တစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Board အမျိုးအစား တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ External Modem ကတော့ ကွန်ပြူတာဘေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်နေရာရာမှာထားပြီးတော့ ပလပ်ထိုးပြီးတော့အသုံးပြုရတဲ့ Box လေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Internal Modem ထပ်နည်းနည်းဈေးကြီးပြီးတော့ Speed နည်းနည်းနေပါတယ်။ အများဆုံးကတော့ မျက်စိရှင်း သက်သာအောင် Internal Modem ကို အသုံးပြုပါတယ်။ Sharing လုပ်ပြီးသုံးချင်ရင်တော့ External Modem ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Modem Card ၀ယ်တဲ့အခါမှာပါလာတဲ့ Modem Driver ကို Install လုပ်ပြီးတော့ ကွန်ပြူတာတွင် Modem ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ် ပါတယ်။ Laptop မှာတော့ Modem ကို တစ်ပါတည်းပါတတ်ကြပါတယ်။ Laptop Modem ကတော့ တစ်ခါတည်းပါဝင်နေလို့ Install လုပ်စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ။ ရိုးရိုး Modem ထပ်အနည်းငယ် Speed လဲမြန်ပြီးတော့ ဖုန်းလိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက် အသုံးပြုရင်လဲအလွယ်တကူ ချိတ်ဆက် နိုင်ပါတယ်။
Phone Line အနေနဲ့ကတော့ Digital Phone Line ဖြစ်ရပါ့မယ်။ Dial Up Connection အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာတော့ ဖုန်းကို အ၀င်၊ အထွက် အသုံးပြုလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဖုန်းလိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုနေတာဖြစ်လို့ ဖုန်းလိုင်းကျပ်တဲ့ အချိန်တွေမှာဆိုရင် အခက်အခဲအနည်းငယ်တော့ရှိနိုင်ပါတယ်။ မိမိတို့အိမ်ဖုန်းကနေတဆင့် အသုံးပြုရမှာဖြစ်လို့ ရုံးအဖွဲ့အစည်း၊ အင်တာနက်ဆိုင်နဲ့ အခြားဖုန်း အသုံးပြုမှုတွေများတဲ့ မနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းမှာတော့ Connection Speed ကနှေးနေတတ်ပါတယ်။ ညပိုင်းနဲ့မနက်စောစော ဆိုရင်တော့ Modem Speed အတိုင်း Internet Connection Speed ကိုအပြည့်အ၀ ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ISP (Internet Service Provider) အနေနဲ့ကတော့ Dial Up Connection အတွက် Bagan Net ကနေ ရောင်းချတဲ့ Access Kit ကို ၀ယ်ယူ ထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Access Kit ကိုဝယ်ယူဖို့အတွက် လျှောက်လွှာတင်စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ။ Access Kit မှာပါတဲ့ User Name နဲ့ Password ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ Internet Connection ကိုချိတ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့အသုံးပြုချင်တဲ့ Access Kit အချိန်အမျိုးအစား (၁၅နာရီ၊ နာရီ ၃၀၊ နာရီ ၆၀) ကိုလိုက်ပြီးတော့ နီးစပ်ရာ Internet Café; Cyber နဲ့အခြားစတိုးဆိုင်များမှာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင် ပါတယ်။ Access Kit ထဲမှာ User Name and Password တို့အပြင် မိမိတို့အသုံပြုနေတဲ့ Operating System အမျိုးအစားအလိုက် ဘယ်လိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးထားတဲ့ စာရွက်လေးလဲပါဝင်ပါတယ်။ အခုတော့ အောက်ကလင့်လေးကနေတဆင့် Dial Up Connection ချိတ်ဆက်မှုကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Start – Control Panel – Network Connection ကိုရောက်အောင်သွားပါ။ (သို့) Start > Connect to > Show all Connection ကနေလဲ တိုက်ရိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ Network Connections Box ထဲကို ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Network Connection box ထဲမှ New Tasks အောက်ရှိ CreateaNew Connection ကိုနှိပ်ပါ။
1.	Connect to the Internet ကို Green Iron bubble လုပ်ထားပေးပါ။ ပြီးရင် Next ကိုဆက်လုပ်ပါ။
2.	“Set up my connection manually” ကို Green iron bubble ရွေးပေးပါ။ နောက်ပြီးရင်တော့ Next ကိုဆက်ပြီးတော့ Click ဆက်လုပ်ပါ။
3.	ပထမဆုံး “Connect usingadial up modem” ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Next ကိုဆက်နှိပ်ပါ။
4.	ISP Name နေရာတွင် “BganNet” သို့မဟုတ် “Myantel” ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။ ထို့နောက် Next ကိုဆက်လက်နှိပ်ပေးပါ။
5.	Phone number နေရာတွင် (146) ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ 146 ကနေတဆင့် Internet Service Provider ကိုအဆက်အသွယ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ 146 လိုင်းကိုခေါ်ဆိုပြီးအသုံးပြုတဲ့အတွက် ဖုန်းဖိုးဝန်ဆောင်ခကို ပေးရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
6.	ထို့နောက် Internet Account Information နေရာတွင် UserName နဲ့ Password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ (User Name and Password ကတော့ Access kit ထဲမှာပါဝင်တဲ့ နံပါတ်လေးများဖြစ်ပါတယ်။) Confrim ဖြစ်အောင် Password ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ရိုက်ပါ။ ပြီးရင် Next ကိုဆက်လက်သွားပါ။
7.	“Addashortcut to this connection to my desktop” ကို check လုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ မိမိ Desktop မှာ Connection ပုံစံလေးတစ်ခုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မထားချင်ဘူးဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ Desktop မှာမထားဘူးဆိုရင် (Start – Connect to – BaganNet connection) ဆိုပြီးတော့အဆင့်ဆင့်သွားရပါမယ်။ ပြီးနောက် Finish ကို click လုပ်လိုက်ပါ။
8.	Finish လုပ်ပြီးတာနဲ့ “Connect Dial-up Connection” ဆိုပြီးတော့ Box လေးတစ်ခုကျလာ မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ box လေးမှာ Properties ကို click လုပ်ပါ။
9.	ထို Properties box လေးထဲမှ “Option” tag လေးကိုသွားပါ။
10.	“Option” tag အောက်ရှိ Redialing Options မှာ Redial attempts, Time between redial attempts and Idle time before hanging up box လေးတွေနေရာတွင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာရွေးချယ် ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
11.	ထို့နောက်ဆက်လက်ပြီး Networking tag ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Internet Protocol (TCP/IP) နှင့် QoS Packet Scheduler တို့ကို check လုပ်ပေးပါ။ ပြီးရင် Internet Protocol (TCP/IP) ကိုရွေးပြီးနောက် “Properties” ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးနောက် OK ကို နှိပ်ပါ။
12.	အဲဒီနောက်မှာတော့ Internet Protocol Properties box လေးတစ်ခုကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Obtain an IP address automatically ကို check လုပ်ပေးပါ။ နောက်တော့ Use the following DNS server address ကိုရွေးပေးပါ။ ပြီးနောက် 203.81.71.69 နှင့် 203.81.71.73 တို့ကိုရိုက်ထည့်ထားပါ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ OK ကို click လုပ်လိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် Connect Bagan Net Box လေး	ဆီမှာရှိတဲ့ Dial ကို Click လုပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီနောက်မှာ Modem နဲ့ ဖုန်းကနေတဆင့် ဖုန်းခေါ်သလိုမျိုး အသံကြားရပြီးတော့ Modem မှ အသံရှည်ကိုကြားလိုက်ရပြီးဆိုတာနဲ့ Internet Connection ချိတ်ဆက်မိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းလိုင်းအားမယ်ဆိုရင် (သို့) လိုင်းရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ချက်ချင်းကို Internet ကိုချိတ်ဆက်မိမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ မိမိတို့ရဲ့ Computer ရဲ့ Taskbar မှာ Computer နှစ်လုံးဆင့်ပုံလေးနဲ့ မီးလေး လင်းလိုက်၊ မှောင်လိုက်ဖြစ်ကာ Bagan Net Connection is now Connected ဆိုတဲ့ စာတမ်းလေးနဲ့ Speed (52Kbps; 54Kbps; 56Kbps) ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Dial Up Connection ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ - အများကြီးသိပ်မရှိပါဘူး။ အိမ်မှာအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်တယ်။ အလွယ်တကူ တပ်ဆင်ရလို့ အချိန်ကုန်ခြင်းနဲ့စရိတ်စက သက်သာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Dial Up Connection ရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ - Connection Speed က Kbps လောက်ပဲရတော့ နှေးတယ်လိုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းလိုင်းနဲ့တပ်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုရလို့ ဖုန်းလိုင်းကျပ်တဲ့အချိန်တွေဆိုရင် Connection Speed နှေးမယ်။ Internet အသုံးပြုနေလို့ ဖုန်းဆက်လို့မရတာတွေရှိမယ်။
အောက်မှာတော့ Internet; ISP; Phone Exchange; Modem တို့ ဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲဆိုတာကိုပြထားတဲ့ ပုံလေးကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
နောက်နေ့မှာတော့ iPSTAR Connection အကြောင်းလေးထပ်ပြောပြပါမယ်။ Connection အားလုံးကိုတစ်ခုတည်းနဲ့ပို့စ်တင်ရင် အရှည်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ ပုံတွေလဲအများကြီးဖြစ်မယ်၊ ဖတ်ရတဲ့လူလဲ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Connection အားလုံးရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်ချက်၊ ဘယ်လိုနေရာတွေကိုအသုံးပြုနိုင်လဲဆိုတာကိုလဲ တတ်နိုင်သလောက်ပြောပြပေးထားပါမယ်။ အဲဒါကြောင့် Connection အမျိုးအစားလိုက် တနေ့တစ်မျိုး (သို့) နှစ်မျိုး တင်ပေးသွားပါ့မယ်။ ပို့စ်အရေအတွက်များစေချင်လို့လုပ်တဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။
အရင်ကတော့ Dial Up Connection အကြောင်းကို (http://www.myanmarfamily.org/forum/s...ial+connection) ဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်။ အခုကတော့ အားလုံးနီးပါးအသေးစိတ်ကို ဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး ဗဟုသုတများစွာ တိုးပွားနိုင်ပါစေခင်ဗျာ။ (Bold လုပ်ဖို့စိတ်မရှည်တော့လို့ ဒီတိုင်းသာဖတ်ပေးပါခင်ဗျာ။ )
Last edited by poekaunglay87; 01-08-2009 at 12:19 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 82 ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုပျင်း, ကိုမိန်နွယ်, ကိုဦး, ကိုဦး, ဂတုံးလေး, စုဖုရားလတ်, ဆန်းမောင်, ဆွိ, ညီနေမင်း, ဒဿဂီရိ, နန်းနွယ်, ဖက်တီးလေး, ဖိုးရှမ်း, ဖယောင်း, မင်းခကို, မမထွန်းထွန်း, မိုးလွင်, မျိုးမင်းငယ်အောင်, ယွမ်ယွမ်, လူပျင်း, လူမုန်း, ဝင်းအောင်, သည်းလင်းထွန်း, သူရစိုး, ဟိန်းထက်ဇော်၅၂, အမောင်, ဧပရယ်မောင်ကြီး, ကော်ဖီ, ကျော်ထက်ချိန်, ဇေယျာအေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်ကို, မောင်ဖိုးစိုး, မောင်သံသရာ, မောင်တေဇာဝင်း, မွေဖု, လေပြေညင်း, အောင်မိုးထွန်း, နွေဦးကံကော်, ငြိမ်းချမ်း, ကြက်ရိုး, ကြက်ဥခေါက်မုန့်, ဖြိုးယံလေး, alicia5556, AZM, azp09, bonge, centurymg, chitnyimalay, goldstar, happydragon23, hazyworld, heavenkoko, hightechkey, hninn nu, htetlinnaung, htikewailinn, ko myo, kozaw.dagon, KznT, moemama2008, myatminchit, myintsoe, naung252, nss, Oliveway, pannuko, pho oo, phoelapyaee, phyomyintthein, phyothuhein, runner.zaw, sky4ster, tartarlay18, thamadi, thurein, Toekalay, tu tu, tunlinaungt456, wunna313, yawnathan, Zin Ko
iPSTAR Broadband Connection အကြောင်း!!!
ဒီ Connection အမျိုးအစားကတော့ ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကိုသုံးပြီးတော့ Internet Connection ကော၊ ဖုန်းလိုင်း ကော နှစ်မျိုးလုံးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Connection အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ iPSTAR Connection ကလဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသုံးပြုနေသော အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများအနက်မှ Broadband Connection အမျိုးအစားတစ်မျိုးလဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့ နေရာဒေသတွေမှာ ဖုန်းလိုင်းအသုံးပြုချင်လို့ iPSTAR Connection ကိုအသုံးများကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုံးကတော့ အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာ e-Learing အတွက်အသုံးပြုကြတယ်။ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားတောင်ပေါ်မှာတောင် iPSTAR ဖုန်းဆိုပြီးတော့ ၀န်ဆောင်မှုပေးတာတွေလဲ အရင်နှစ်တွေတုံးကတော့ရှိခဲ့ဘူးတယ်။ (၂၀၀၀ခုနှစ် ကျော်လောက်ကထင်တယ်။ ပိုးကောင်လေးတို့ သွားတုံးက သတိထားမိတာပါ။ iPSTAR phone ဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်သွယ်အသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ဘူးတယ်။) iPSTAR Connection ကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ MPT မှာလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာ လုပ်ငန်းအတွက်သုံးမယ်ဆိုလဲ လုပ်ငန်းလိုင်စင်တို့၊ လိုအပ်တာတွေ တင်ပြပြီးတော့ မြန်မာဆက်သွယ်ရေးကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ ပိုးကောင်လေးသိသလောက်ကတော့ သိပ်မချပေးတော့ပါဘူး။ iPSTAR Connection ဟာ ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေး စနစ်တစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် ဖုန်းလိုင်း (Cable Phone Line) ရှိစရာမလိုပါဘူး။ သူ့မှာ Internet; e-mail ; Phone Line တို့ကို တချိန်တည်း၊ တပြိုင်နက် တည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အချိန်းမရွေး (7days and 24 hours) နေ့ညမပျက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မီးမလာရင်တောင်မှ Watt (2000) လောက်ရှိတဲ့ အင်ဗတာ သို့မဟုတ် မီးစက်တို့ဖြင့်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ iPSTAR Connection ရဲ့ Satellite Dish (စလောင်းဗန်း) ကိုတော့ ၂ပေ၊ ၄ပေ ဆိုပြီးတော့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ (ပုံမှာ Satellite Dish တပ်ဆင်ထားတာကိုတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။) iPSTAR Connection တစ်ခုလျှောက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ ဖုန်းလိုင်း (၄)လိုင်းကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုး Digital Phone တွေနဲ့တော့ နံပါတ်ကတော့မတူပါဘူး။ သူ့ဖုန်းမှာ ဂဏန်းကတော့ (၇)လုံး ရှိပါတယ်။ ၃၃၅၅၆၆၇ တို့လိုမျိုး၊ ၄၄၂၂၈၈၁ တို့လိုမျိုး (၃၃နဲ့၄၄) စတဲ့ ဖုန်းလိုင်းမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းခေါ်ခနှုန်းကတော့ တစ်မိနစ်ကို (၅၀)ကျပ်ကို မြန်မာငွေပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အ၀င်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အတွက် ဖုန်းခပေးစရာမလိုပါဘူး။ အထွက်ခေါ်ဆိုမှုအတွက်သာ ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်း လေးလုံးရှိတယ်ဆို လေးလုံးလုံး တပြိုင်တည်း ဖုန်းပြောနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းကြေးကိုလဲ တစ်လုံးချင်းဆီဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြား (oversea call )ကိုလဲ Digital Phone လိုမျိုးခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျသင့်ငွေကတော့ Digital Phone အတိုင်းကျသင့်ပြီးတော့ FEC နဲ့ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းကြေးဆောင်ရမယ့် နေရာနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့ ပုံသေဖုန်းကြေးကိုဆောင်ထားလို့ရပါတယ်။ တစ်လကို တစ်သိန်းနဲ့ ပုံသေ ဖုန်းကြေးဆောင်ထားလို့ ရပါတယ်။ အဲဒီတစ်သိန်းဆောင်ထားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ဖုန်းပြောပြော တစ်လအတွက် အပြီး တစ်သိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းအသုံးပြုတဲ့ အချိန်များတယ်ဆိုရင်တော့ တန်မယ်ပေါ့ဗျာ။ မများရင်တော့ မတန်ဘူးပေါ့။ iPSTAR Broadband Connection မှာ VoIP (Voice Over Internet Protocol) ကိုလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ VoIP အတွက်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းပြောခက မတူပါဘူး။ နည်းနည်းများသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ iPSTAR Connection ဖုန်းလိုင်းကိုတော့ရိုးရိုးဖုန်းလိုင်းလိုမျိုး အသံကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ကြားနိုင်ပါတယ်။ iPSTAR Connection တပ်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့ သိန်း (၅၄)သိန်း ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။ တပ်ဆင်စရိတ်တွေ၊ ပညာရှင်ခတွေ (ကျွှမ်းကျင်တဲ့လူတပ်ဆင်ပေးမှသာ အဆင်ပြေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လိုင်းဖမ်းဖို့အတွက်၊ (ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလိုင်းမိတာလား၊ မြေကြီးပေါ်မှာပဲ ဒီတိုင်းလိုင်းမိတာလား ဆိုတာ စမ်းသပ်ဖို့အတွက်)၊ ကွန်ပြူတာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ အတွက်) ခရီးအလိုက်ကုန်ကျမယ့် စရိတ်တွေ မပါသေးပါဘူး။ ဖုန်းလိုင်းအတွက်လဲ တစ်နှစ်ကိုနှစ်စဉ်ကြေး ဖုန်း(၄)လုံးအတွက် (၆၀၀၀၀) ကျပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ iPSTAR Broadband Connection ကို အင်တာနက်အဖြစ်ပါ အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Sharing နဲ့ Delicated ဆိုပြီတော့ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Sharing ဆိုတာကတော့ အင်တာနက်ကိုမိမိတို့တပ်ဆင်အသုံးပြုချိန်မှသာ Connection bandwidth ကိုဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Delicated ကတော့ မိမိတို့ အင်တာနက်ကို သုံးသုံး၊ မသုံးသုံး ၂၄နာရီ Connection bandwidth ကိုဖွင့်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Connection Speed နဲ့ Fees ကြေးတွေကတော့ -
အားလုံး Connection အမျိုးအစားတွေအတွက် Data Limit ကတော့ ကန့်သတ်ချက်မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ Sharing Internet Connection ကိုတော့ ရိုးရိုးအသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေမှာပါ။ Delicated Internet Connection အတွက်ဆိုရင်တော့ သိပ်ဟန်မယ်မထင်ပါဘူး။ Internet Fees ကြေးက လေးဆလောက်ကွာနေလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းလိုင်းလေးလိုင်းလုံးမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ဈေးသိပ်မကြီးဘူးလို့ ထင်ရပါမယ်။ ဖုန်းလိုင်းတစ်လိုင်းချင်းဆီအတွက်ဆိုရင်တော့ ဈေးကများတယ်လို့ထင်ရမှာပါ။
iPSTAR Broadband Connection အားနည်းချက် - ဖုန်းလိုင်းလေးလိုင်းလုံးအသုံးပြုမှသာလျှင် ပိုက်ဆံအကုန်အကျသက်သာမယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်ကလဲအရမ်းများပါတယ်။ စက်တစ်ခုခုပျက်ခဲ့ရင်လဲ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အလွယ်တကူမပြင်နိုင်လို့ ပညာရှင်တွေကို ခေါ်ယူရမယ်ဆိုရင် အရမ်းဝေးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်နေရင်တော့ လာစရိတ်၊ စားစရိတ်၊ ပေးစရိတ်နဲ့ ကာမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Internet Connection သုံးမယ်ဆိုရင်လဲ အခု Connection Speed တွေထပ်စရာ နှေးနေတာတွေရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ မသုံးသင့်ပါဘူး။
အောက်ပါအသင်းဝင် 57 ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုမိန်နွယ်, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ဂတုံးလေး, ဆန်းမောင်, ဆွိ, ညီနေမင်း, ဒဿဂီရိ, နန်းနွယ်, ဖက်တီးလေး, ဖိုးရှမ်း, မမထွန်းထွန်း, မိုးလွင်, ယွမ်ယွမ်, ဝင်းကျော်ဦး, ဝင်းအောင်, အမောင်, ဧပရယ်မောင်ကြီး, ကော်ဖီ, ကျော်ထက်ချိန်, ဇေယျာအေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်ကို, မောင်ထက်, မောင်ဖိုးစိုး, မောင်သံသရာ, လေပြေညင်း, အောင်မိုးထွန်း, ကြက်ဥခေါက်မုန့်, ဖြိုးယံလေး, aung.123a, AZM, azp09, bonge, centurymg, chitnyimalay, goldstar, happydragon23, hightechkey, hninn nu, htetlinnaung, japoe, kaungkyizaw, ko myo, kozaw.dagon, KznT, myintsoe, naung252, nss, phoelapyaee, phyomyintthein, phyothuhein, runner.zaw, spaceboy, Storm, tu tu, yawnathan, Ye Naung
Broadband Wireless Local Loop Connection!!!
ဒီConnection အကြောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် ပုံတွေ၊ စာတွေ လုပ်ရတာတော်တော်လေး အချိန်ပေးရပါတယ်။ တနေ့တစ်မျိုး Connection အကြောင်းတင်ပေးနိုင်ဖို့တော့ ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ နေ့တိုင်းပို့စ်မတင်ပေးဖြစ်ရင်လဲနားလည်ခွင့်လွှတ်ကြပေးပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေပြီးတော့ ပျော်ရွင်မှုပေါင်းများစွာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 41 ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂတုံးလေး, စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, ညီနေမင်း, ဒဿဂီရိ, ဖိုးရှမ်း, မိုးလွင်, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, အမောင်, ဧပရယ်မောင်ကြီး, ကော်ဖီ, ကျော်ထက်ချိန်, ဇေယျာအေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, လေပြေညင်း, အောင်မိုးထွန်း, ကြက်ဥခေါက်မုန့်, AZM, azp09, bonge, chitnyimalay, goldstar, happydragon23, hightechkey, hninn nu, ko myo, kozaw.dagon, KznT, myintsoe, naingthu, phoelapyaee, phyomyintthein, phyothuhein, runner.zaw, soemaung, spaceboy, tu tu, yawnathan, Ye Naung
ADSL Broadband Connection အကြောင်းလေး!!!
ဒီConnection အမျိုးအစားကတော့ လူတိုင်းနဲ့ရင်းနှီးပြီးသား အားလုံးကြားနေကြဖြစ်မယ့် Connection အမျိုးအစားတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ Broadband Connection အမျိုးအစားထဲက အခုနောက်ပိုင်းမှာ အသုံးများလာပြီးတော့ လူသိများလာတဲ့ ADSL Connection အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ADSL Broadband Connection အတွက် ဖုန်းလိုင်းရှိစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ။ ဖုန်းလိုင်းမရှိဘူးဆိုရင်လဲ ဖုန်းလိုင်းပါတစ်ခါတည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းလိုင်းရှိတယ်ဆိုရင်လဲ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ မိမိတို့ဖုန်းလိုင်းယူထားတဲ့ ဖုန်းအိတ်ချိန်းမှာ DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer Device) ရှိမရှိဆိုတာစစ်ဆေးပြီးတော့ Connection ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကဖုန်းအိတ်ချိန်း တော်တော်များများမှာတော့ DSLAM ရှိပါတယ်။ DSLAM ဆိုတာက ဖုန်းထဲမှာ Frequency အမြင့်ဆုံးနဲ့လာတဲ့ Signal တွေကို ထုတ်လွှတ်ပေးဖို့ ခွဲထုတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုထားတဲ့ Device အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ADSL Connection ကိုလဲ မိမိတို့လိုချင်တဲ့ Speed အမျိုးအစား၊ ဖုန်းလိုင်းယူမယူ၊ စဉ်းစားပြီးတော့ မြန်မာဆက်သွယ်ရေး (MPT)နဲ့Bagan Net တို့မှာလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ADSL Broadband Connection မှာ ဖုန်းလိုင်းရှိပါက အင်တာနက်လိုင်းပါလျှောက်ပြီးတော့ ဖုန်းကော၊ Internet Connection ကော နှစ်မျိုးလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Connection အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းလိုင်းချို့ယွင်းချက်ကြောင့် ပျက်နေပြီးတော့ ဖုန်းခေါ်ဆိုလို့ မရရင်တောင် Internet Connection ကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ADSL Connection အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းလိုင်း တကယ်ကိုပျက်သွားရင်တော့ Internet Connection လဲ အသုံးပြုလို့တော့ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ Phone ကော၊ Internet Connection နှစ်ခုလုံး တပြိုင်နက်တည်းအသုံးပြုနိုင်တာလဲဆိုရင် ဖုန်းလိုင်းကလာတဲ့ Frequency နဲ့ ADSL Connection လိုင်းကအသုံးပြု Frequency မတူညီလို့ အသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ တယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ Copper Wire ရဲ့ Frequency range ဟာ ကျယ်ပြန့်ကြီးမား လွန်းတဲ့အတွက် Low frequency range တွေကိုတော့ ADSL Connection မှာဆိုရင် Voice Signal (အသံ) အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့၊ high frequency range ကိုတော့ digital data tramission အတွက် ADSL Connection မှာအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် DSLAM Device ကတော့ တယ်လီဖုန်းအိတ်ချိန်းရုံးတွေမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ ဖုန်းအိတ်ချိန်းရုံးနဲ့မိမိတို့အသုံးပြုမယ့်နေရာနဲ့ကလဲ အကွားအဝေး နည်းနည်းဝေးသွားမယ်ဆိုရင် Internet Connection Speed ကလဲ အနှေးနဲ့အမြန် နည်းနည်းကွာခြားချက်တော့ရှိမှာပါ။ ADSL Braodband Connection Speed မှာ Download; Upload Speed အကြောင်းလေး မပြောခင်မှာ ADSL လို့ခေါ်တဲ့ “A” ကို ဘယ်ကြောင့်ခေါ်ဆိုရလဲဆိုတာလေးကို နည်းနည်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ်။ “A” ဆိုတာက Asymmetric လို့ ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး Asymmetric လို့ခေါ်ရလဲဆိုရင်တော့ ADSL Connection မှာ Connection Line တွေထဲမှာ Digital Data Signal ဟာ Download Speed နဲ့ Upload Speed ကို အချင်းချင်းတူညီတဲ့ Flow တွေနဲ့မသွားတဲ့ အတွက်ကြောင့် Asymmetric လို့ခေါ်တဲ့ “A” ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးကတော့ DSL (Digital Syscriber Line) Broadband Connection လို့မခေါ်ဘဲနဲ့ အရှေ့မှာ “A” (Asymmetric )ထည့်ပြီးတော့ ADSL Broadband Connection လို့ခေါ်ဆို ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ADSL Broadband Connection မှာဆိုရင် Upload Speed တွင်တင်လိုက်တဲ့ Data တွေထက် Download data တွေကပိုမိုမြန်ဆန်ပါတယ်။ (Download Speed များပြီး၊ Upload Speed နည်းတာဖြစ်ပါတယ်။) ADSL Broadband Connection မှာ ရိုးရိုး ADSL တွေမှာဆိုရင် Download Speed ဟာ 6MB လောက်ရပြီးတော့ Upload Speed ကတော့ 800Kb လောက်ပဲရပါတယ်။ ADSL Connection အမျိုးအစားတွေထဲမှာ ADSL; ADSL 2; ADSL 2+ ဆိုပြီးတော့ သတ်မှတ်ထားတာတွေရှိပါတယ်။ ဘာလို့သတ်မှတ်ထားလဲ ဆိုတော့ Upload Speed နဲ့ Download Speed ကို အသုံးပြုရတာမတူလို့ အခုလိုမျိုး သတ်မှတ်ပြီးတော့ အင်တာနက်သုံးရတာအဆင်ပြေ လွယ်ကူအောင် ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ADSL2Broadband Connection မှာဆိုရင်တော့ Download Speed က 8MB လောက်ရပြီးတော့ Upload Speed ကတော့ 1MB အထိရပါတယ်။ ADSL 2+ Broadband Connection မှာဆိုရင်တော့ Download Speed က 24MB လောက်ရပြီးတော့ Upload Speed ကတော့ 1MB လောက်ထိပဲရနိုင်ပါတယ်။ (MPT နဲ့ Bagan Net မှာ ADSL Connection သုံးမျိုးထဲက ကြိုက်တာကိုလျှောက်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေပြောတဲ့ Upload Speed နဲ့ Download Speed တွေနဲ့ အခု ပိုးကောင်လေး ပြောထားတဲ့ Speed တွေဟာကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့တွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ Speed (စာတွေထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့Speed) နဲ့ လက်တွေ့ Speed အသုံးပြုကြည့်တဲ့အခါမှာ ရတဲ့ Speed နဲ့မတူလို့အနည်းငယ်ကွာခြားချက်တော့ရှိနိုင်ပါတယ်။) ADSL2နဲ့ ADSL 2+ မှာ ဘာကြောင့် ADSL Connection နဲ့ Speed ချင်းမတူရလဲဆိုရင်တော့ ADSL2နဲ့ ADSL 2+ မှာသုံးထားတဲ့ Modulation technique ပြောင်းလဲအသုံးပြုထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ADSL2နဲ့ ADSL 2+ မှာဆိုရင် သုံးတဲ့ Frequency က အရမ်းမြင့်သွားပြီး တော့ Upload /Download Speed ကို ခံနိုင်ရည်ပိုရှိလာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ADSL မှာလို ဖုန်းအိတ်ချိန်းနဲ့ အကွာအဝေးကိုဂရုစိုက်ရပေမယ့် ADSL2နဲ့ ADSL 2+ မှာ အကွားအဝေးလဲနည်းနည်းကျယ်ပြန့်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခုဆိုရင် ADSL Connection; ADSL 2; ADSL 2+ Connection အကြောင်းအနည်းငယ် ဗဟုသုတဖြစ်သွားမှာပါ။ အောက်ကပုံလေးကတော့ Company ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ADSL Connecion ကို ဖုန်းအိတ်ချိန်းကနေ ဖုန်းလိုင်းနဲ့Modem သုံးပြီးတော့ ဖုန်းကော၊ Connection ပါချိတ်ဆက်ထားပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။
နောက်နေ့မှ ADSL Modem အကြောင်း၊ VoIP ဖုန်းနဲ့ ADSL Connection အမျိုးအစားတွေအကြောင်းပြောပြပေးပါ့မယ်။ အခုတော့ ဒီလောက်လေးနဲ့ ရပ်လိုက်ပါတော့မယ်။ စာတွေလဲအရမ်းများနေပြီးတော့ နောက်ထပ်လဲ ရှင်းစရာလေးတွေ ရှိသေးလို့နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တာပါ။ (ပို့စ်အရေအတွက်များစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဖတ်တဲ့လူကိုလဲ အရှိန်ပျက်အောင်လုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဝက်လောက် ခွဲတင်လိုက်တော့မှ အပေါ်က ADSL Connection နဲ့ ဖုန်းအိတ်ချိန်း၊ ဖုန်းလိုင်းအကြောင်း ဖြစ်ပြီးတော့ နောက်တပိုင်းက Connection အပိုင်းဆိုပြီးတော့ စိတ်ကူးလိုက်လို့ပါ။) အားလုံးနားလည်သည်းခံခွင့်လွှတ်ကြပါရန်။ . . . .
အောက်ပါအသင်းဝင် 38 ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂတုံးလေး, ဆန်းမောင်, ဖိုးရှမ်း, မိုးလွင်, ဝင်းအောင်, အမောင်, ဧပရယ်မောင်ကြီး, ကော်ဖီ, ဇေယျာအေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, လေပြေညင်း, အောင်မိုးထွန်း, ကြက်ဥခေါက်မုန့်, နိုးတူး, azp09, bonge, Computer, Emc Arkar, goldstar, happydragon23, hightechkey, hninn nu, ko myo, kozaw.dagon, KznT, moe_poung, myatminchit, myintsoe, nss, phoelapyaee, phyomyintthein, phyothuhein, runner.zaw, spaceboy, stability09, tu tu, yawnathan
ADSL Connection အဆက် -
နောက်တစ်ခု ADSL Connection မှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ADSL Modem အကြောင်းနဲ့ VoIP လို့ခေါ်တဲ့ ဖုန်းလိုင်းအကြောင်းလေး နည်းနည်းလေ့လာရအောင်။
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Modem နဲ့ VoIp (Voice over Internet Protocol)
ADSL Modem ဆိုပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသုံးပြုနေကြတဲ့အမျိုးအစား တော်တော်များများ ရှိပါတယ်။ ADSL Modem ကို စတင်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်မခိုင်းခင် (installation မလုပ်ခင်၊ မသုံးခင်) ဆိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိတို့ Connection ယူမယ့် network မှာပဲဖြစ်ဖြစ် စမ်းသပ်ပြီးတော့ Modem နဲ့ Network နှစ်ခုလုံး ကိုက်ညီပြီးတော့ အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုမှဝယ်သင့်ပါတယ်။ Modem ကော၊ Network ကော နှစ်ခုလုံး အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် အဓိက စမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင် Modem နဲ့ Network မကိုက်ညီမှုကြောင့် အသုံးပြုဖို့ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအခါကျရင် Modem ဖိုးသပ်သပ်ကုန်မှာဖြစ်တာကြောင့် စစ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။ Modem နဲ့ Network ကိုက်ညီမှုအတွက် စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်လဲ လာထား ပိုက်ဆံပါပဲ။ စမ်းသပ်ခသဘောမျိုး ငွေပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကဆိုရင်တော့ BaganNet မှာပဲ သူတို့ရောင်းတဲ့Modem ကိုဝယ်ပြီးတော့ သူတို့ဆီမှာပဲ Configuration လုပ်ရပါတယ်။ အပြင်က ၀ယ်ယူအသုံးပြုတဲ့ Modem တွေကို Bagan Net က Configuration မလုပ်ပေးပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းမှသာ အခြားNetworking Company တွေကလဲ Modem တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ Services တွေလုပ်ပြီးတော့ရောင်းချနေတာတွေရှိပါတယ်။ ADSL Modem တွေမှာ data transfer rate ကို အများဆုံး 1000Mbps (1Gbps) လောက်ထိကို transfer လုပ်နိုင်တဲ့ Modem အမျိုးအစားတွေရှိပါတယ်။ Dial Up ရဲ့ External and Internal Modem တို့ရဲ့ 56Kbps နဲ့ ယှဉ်ရင် အဆမတန် ကွာခြားလွန်တဲ့အတွက် အင်တာနက်ကို ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် အလွန်လျင်မြန်တဲ့ Modem အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ Modem ရဲ့ Speed rate ကို တယ်လီဖုန်းလိုင်း (Copper Wire Line) နဲ့ဆက်သွယ်ပြီး အသုံးပြု ထားရတာဖြစ်လို့ ဖုန်းအိတ်ချိန်းရဲ့အကွာအဝေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ Modem Speed ကလဲ အမြန်နှုန်းကတော့ အနည်းငယ်ကွာခြားမှုရှိပြီးတော့ မြန်တယ်၊ နည်းနည်းနှေးတယ် ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသုံးများနေတဲ့ Modem အမျိုးအစားကတော့ လူတိုင်းနှင့်ရင်းနှီးပြီးသား Linsys ADSL Modem အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။
ADSL Modem တွေမှာ VoIP Services အတွက်လဲထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Adapter တွေပါပါတယ်။ VoIP Services ကိုလဲ ADSL Connection လျှောက်တဲ့အခါမှာ ထည့်သွင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ VoIP ဖုန်းဆိုတာကတော့ အရင်က Broadband Wireless Connection အမျိုးအစားတွေမှာလဲ ကြားဘူးမှာဖြစ်ပါတယ်။ VoIPဖုန်းကဘာလဲဆိုတော့ အလွယ်ဆုံးမှတ်ထားလို့ရအောင်ဆိုရင်တော့ အခုအသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းအပြင် နောက်ထပ် ဖုန်းတစ်လုံး သို့ နှစ်လုံးလောက်ကို တပြိုင်နက်တည်း Internet Connection လိုင်းပေါ်မှာ ဖုန်းအသုံးပြုကို ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အသံတွေကို IP Protcol (အင်တာနက်လိုင်း) ပေါ်မှာ အသုံးနိုင်တဲ့ Connection အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ VoIP Phone ကိုလဲ Connection လိုင်းတစ်လိုင်းမှာ တစ်လုံး သို့ နှစ်လုံးအထိ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ VoIP ဖုန်း ရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ Copper Wire ဖုန်းလိုင်း ပျက်သွားရင်တောင် VoIP ဖုန်းကို အသုံးပြုနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလောက်ဆို VoIP phone ကြောင်း အနည်းငယ်သိလောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်။
ADSL Connection လိုင်းအမျိုးအစားလျှောက်ထားမှုကိုတော့ မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Connection လိုင်းကို ယူချင်တဲ့ Bandwith အလိုက် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ မိမိတို့တစ်ယောက်တည်း အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ 256 Kbps လောက်လျှောက်သင့်ပါတယ်။ Cyber café တွေမှာ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ 512Kbps ကနေ မြင့်တာတွေလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ADSL Broadband Connection Service အနေနဲ့ Class (၅)မျိုးရှိပြီးတော့ Speed ကိုလဲ 256Kbps ကနေစတင်ပြီးတော့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်ကြေး၊ လစဉ်ကြေး နှင့် ကနဦးတပ်ဆင်ခ ဆိုပြီးတော့ အနည်းဆုံး FEC 30 ကနေ အများဆုံး FEC 200 (နှစ်စဉ်ကြေးနဲ့လစဉ်ကြေး)၊ ရှိပါတယ်။ Installation Fees အတွက်ကတော့ FEC 1500 ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။
ADSL Connection ရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်ကို မကြည့်တော့ဘဲနဲ့ သူ့ဆီကရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပဲ ကြည့်ပြီးတော့ Connection တပ်ဆင်မယ်ဆိုရင် အသုံးပြုသင့်တဲ့ Connection အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Internet Connection ကို Always on Connection အမျိုးအစားဖြစ်လို့ ကောင်းတာလဲရှိနိုင်သလို၊ မကောင်းတာလဲ အနည်းငယ်ရှိနိုင်တာလေးတွေရှိပါတယ်။ ကောင်းတယ်ဆိုတာ ကတော့ အမြဲတမ်း အချိန်မရွေးအသုံးပြုနိုင်တယ်။ အင်တာနက်ကို Dialing လုပ်စရာမလိုဘဲအသုံးပြုနိုင်တယ်။ ဖုန်းလိုင်းမရှိလဲ ဖုန်းလိုင်းနဲ့ တစ်ခါတည်းလျှောက်ထားပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ်။ ဖုန်းလိုင်းသုံးနေချိန်မှာလဲ အင်တာနက်ကို တစ်ခါတည်းနဲ့ နှစ်ခုတပြိုင်တည်း အသုံးပြုနိုင်တယ်။ အခြား အင်တာနက်ဖုန်း VoIP ဖုန်းကိုလဲ အသုံးပြုနိုင်တယ်။ အင်တာနက် Connection Speed ကလဲမြန်တယ်။ အဲဒီအချက်တွေက ADSL Connection ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေပါ။ မကောင်းတာကတော့ Internet Connection ဟာ Always on Connection ဖြစ်လို့ အခြားအနှောင့်အယှက်တွေရှိနိုင်ပါ။ ဒါကလဲ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်တော့အနည်းငယ် စိတ်မပူလဲရပါတယ်။ ADSL Connection အသုံးမည့်သူများနဲ့အသုံးပြုနေတဲ့သူများအားလုံး အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
နောက်ပုံလေးတစ်ပုံမှာတော့ ISP ကနေ Phone; Modem တို့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ ADSL Broadband Connection ကို အသုံးပြုထားပုံလေး ဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးကတော့ ရုံးတွေမှာ အသုံးများပါတယ်။ Cyber café အချို့မှာလဲ Server တွေထားပြီးတော့သုံးနိုင်ပါတယ်။
အောက်ကနောက်ဆုံးပုံလေးကတော့ ADSL Connection ကို Modem နဲ့ဖုန်းလိုင်း တို့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Connection ချိတ်ဆက်ထားပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းအိတ်ချိန်းမှာ DSLAM လို့ခေါ်တဲ့ (Digital Subsciber Line Access Multiplexer Device) ကို အသုံးပြုပြီးတော့ Modem ကနေ Gateway၊ Gateway ကနေ Switch တွေ၊ Router တွေအသုံးပြုပြီးတော့ ကွန်ပြူတာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ DSLAM ဟာဆိုရင် တယ်လီဖုန်းလိုင်းထဲမှာ Speed အမြန်ဆုံး Frequency ဖြင့်လာတဲ့ Signal တွေကို ခွဲထုတ်ပြီးတော့ ADSL Modem ကိုချိတ်ဆက် ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ Device အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
ဗဟုသုတအနေဖြင့် - ADSL Connection လိုမျိုးဘဲ နောက်ထပ် DSL Connection အမျိုးအစားတွေထဲမှာ Upload/ Download Speed တူတာတွေရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ SDSL (Single line Digital Subscriber Line) နဲ့ HDSL (High bit data rate Digital Subscriber Line) ဆိုပြီး တော့ အဲဒီနှစ်မျိုးလဲရှိပါတယ်။ ဗဟုသုတအနေနဲ့ DSL ရှေ့ကအသုံးပြုလေ့ရှိတတ်တဲ့ (A; S; H) အကြောင်းလေးကိုပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေဗျာ။ (WiMax Connection အကြောင်းကို မကြာမီလာမည်ပေါ့ဗျာ။)
အောက်ပါအသင်းဝင် 34 ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုထက်ကို, ဂတုံးလေး, ဆန်းမောင်, ဖိုးရှမ်း, အမောင်, ဧပရယ်မောင်ကြီး, ကော်ဖီ, ဇေယျာအေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, လေပြေညင်း, အောင်မိုးထွန်း, ကြက်ဥခေါက်မုန့်, aungzaw, AZM, azp09, chitnyimalay, goldstar, happydragon23, hightechkey, hninn nu, ko myo, KznT, moemama2008, moe_poung, mttwin, myintsoe, phyomyintthein, phyothuhein, spaceboy, stability09, tu tu, yawnathan, Ye Naung
ပိုးကောင်လေးတို့ အလုပ်တွေ ကြိုးစားနေပါလား။ အားရတယ်။ အထူးအသင်းဝင်ဆိုတာ အဲဒီလို ဖြစ်နေမှ အားရတာ။ ၀မ်းသာတယ်။
ဒဿဂီရိ, မောင်သံသရာ, hninn nu, phyothuhein
WiMax Connection (Worldwide Interoperability for Microwave Access)!!! အကြောင်းလေး -
WiMax Broadband Connection ကတော့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ခေတ်အရမ်းစားလာတဲ့ Wireless ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှု နည်းပညာသစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်းသစ်ပြီးတော့တီထွင်ထားတဲ့ ကြိုးမဲ့နည်းပညာတွေပေါင်းပြီးတော့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ Connection အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ WiMax Connection ဆိုတာကတော့ တယ်လီဖုန်းလိုင်းတောင်မလိုပါဘူး။ တယ်လီဖုန်းလိုင်းမရှိတွေဘဲနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Connection အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Internet ကြည့်ရှုနိုင်သည့် အပြင် Internet Protocol အခြေခံတယ်လီဖုန်းလိုင်းဖြစ်တဲ့ VoIP ဖုန်းတွေမှာတောင် လျင်မြန်တဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ တယ်လီဖုန်းမရှိသူတွေအနေနဲ့လဲ Internet Connection အပြင် VoIP ဖုန်းလိုင်းတစ်လိုင်းကနေ နှစ်လိုင်းအထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ WiMax Connection ဟာကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးကို သုံးထားတဲ့အတွက် နေရာအကွာအဝေးတော်တော်များများ အထိဆက်သွယ်အသုံးပြုနိုင်လို့ ADSL Broadband Connection နှင့် Broadband Wireless Local Loop Connection တို့လိုမျိုး Cable တွေ၊ Ethernet ကြိုးတွေဖိုး ကုန်ကျစရိတ် သက်သာနိုင်ပါတယ်။ WiMax Connection ဟာဆိုရင် ကို Base to many Multi-point ပုံစံသွားတဲ့ Connection အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ WiMax Connection ဟာ IEEE 802.16 စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ IEEE 802.16 စံသတ်မှတ်ချက် အနေနဲ့လဲ WiMax Connection မှာ အမျိုးအစား(၅)မျိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတိုင်း Standard သတ်မှတ်ထားပြီးတော့အသုံးပြုနေတဲ့ IEEE 802.16 အမျိုးအစားကတော့ IEEE 802.16 အပါအ၀င် (၃)မျိုး ရှိပါတယ်။ IEEE 802.16; IEEE 802.16a;IEEE 802.16d; IEEE 802.16e တို့ဖြစ်ပါတယ်။ (နောက်ထပ်ကတော့ (၂)မျိုးကတော့ IEEE 802.16b and IEEE 802.16c တို့ဖြစ်ပါတယ်။) IEEE 802.16d မှာဆိုရင်တော့ Wireless Application ပါထည့်သွင်းအသွင်းပြုနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်ပါတယ်။ IEEE 802.16e ကတော့ Mobile ဖုန်းတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ အသုံးပြုနေတဲ့ WiMax Connection Speed ကတော့ မိမိတို့အသုံးပြုတဲ့ Tower နဲ့ Channel အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ ပြောင်းလဲမှု တွေရှိနိုင်ပါတယ်။ WiMax Connection Network မှာတော့ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသူတွေဟာ မိမိတို့အသုံးပြုထားတဲ့ Network Connection အတွင်း မိုင် (၃၀)လောက်ပတ်လည်အတွင်း ကြိုးမဲ့စနစ် လှမ်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ Connection အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ WiMax Connection ဟာတပြိုင်နက်တည်းအသုံးပြုနေသူတွေများလာရင်တောင် Internet Traffic မဖြစ်တဲ့အပြင် Connection Speed လဲကျသွားတာတွေ၊ ဘာတွေမဖြစ်တဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက် WiMax Connection မှာ သင့်တော်တဲ့ Radio waves တွေကနေတဆင့် Internet ကိုချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် ကျော်သွားနိုင်တဲ့ Cognitive radio waves လို့နည်းပညာ ကိုထည့်သွင်းထားတဲ့ Connection အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Cognitive radio waves ဆိုတာကတော့ Connection အတွက် သင့်တော်တဲ့ radio waves တွေကို အလွယ်တကူနဲ့အလိုအလျောက် ချိတ်ဆက်ကူးပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနည်းပညာထည့်သွင်း ထားလို့ Internet Traffic ပိတ်ဆို့မှုတွေ WiMax Connection မှာမဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် WiMax Connection အတွက်ဆိုရင် Radio waves တွေ အတော်များများအသုံးပြုဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
WiMax Connection တွေဟာ Radio waves တွေရဲ့ကြိမ်နှုန်းခွင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ digital bits တွေကို အမြောက်အမြားကို ကြိုးမဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ ထုတ်လွှတ်ပေးပြီးတော့ Connection ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ WiFi Network တွေကို ထပ်ဆင့်အသုံးပြုနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Connection အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Internet ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် Fiber Optic cable line တွေလို ကုန်ကျစရိတ်မများတဲ့ Connection အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ WiMax Connection ဟာ ကြိုးမဲ့ရေဒီယို နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားလို့ Internet Connection ပိုမိုမြန်ဆန်တယ်၊ စရိတ်သက်သာပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ Desktop Computer; Laoptop; Notebook;SmartPone တို့မှာ WiMax Connection ကိုအသုံးနိုင်အောင်လို့ WiMax Access chip လေးတွေကိုထည့်သွင်း ထုတ်လုပ်လာတာလေးတွေရှိပါတယ်။
WiMax Connection ကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး (MPT) နှင့် RedLink Communications တို့မှာ လျှောက်ထားပြီးတော့ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Class အမျိုးအစားအနေနဲ့ (၃)မျိုးရှိပါတယ်။ Consumer (128 Kbps: 1PC); Enterprise (256Kbps: 4PC) နဲ့ Corporate (512Kbps: 12PC) တို့ဆိုပြီးတော့ Speed အမျိုးအစားအလိုက် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ကွန်ပြူတာအရေအတွက်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Monthly Fees အနေနဲ့လဲ (45 FEC; 75 FEC; 130 FEC) ဆိုပြီးတော့ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Free e-mail account ကိုလဲ Class အမျိုးအစားအလိုက် မိမိတို့အသုံးပြုချင်သလောက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ VoIP phone ကိုလဲ အသုံးပြုချင်ပါကလဲ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ (အခုတော့ Outdoor unit တစ်ခုတည်းဖြင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့ ဖုန်းလိုင်းတောင်မရှိလဲ အသုံးပြုနိုင်ရန် RedLink က စရိတ်နည်းနည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေး နေပါတယ်။)
ပိုးကောင်လေး WiMax Connection ကိုတော့ 256Kbps Speed နဲ့ Connection လိုင်းတစ်လိုင်းကိုတော့ Project case တစ်ခုကနေ တစ်ခါတော့လေ့လာဘူးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပိုးကောင်လေးသိထားတဲ့ အနည်းငယ်အချက်အလက်တွေနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ Wimax Connection အကြောင်းကို MART လို့ခေါ်တဲ့ Minnesota Association For Rural Telecommunications ကနေပြုလုပ်ထားတဲ့ Powerpoint နဲ့ Introduction WiMax Technology စာအုပ်တွေကနေ လေ့လာပြီးတော့ အနည်းငယ်ရေးထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
Minnesota Association For Rural Telecommunications ရဲ့ PowerPoint မှာတော့ WiMax ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံ၊ IEEE အမျိုးအစားတွေနဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေကို အရှင်းလင်းဆုံးစာလုံးလေးတွေနဲ့ ကြားဖူးနေကြ စကားလုံးလေးတွေ အသုံးပြုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ အလွယ်တကူဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အောက်ကလင့်မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Introduction to WiMax Technology မှာဆိုရင်တော့ WiMax Connection ပေါ်ပေါက်လာပုံကအစ အသေးစိတ်ကိုရှင်းပြထားပါတယ်။ အောက်ကလင့်လေးမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံအနေနဲ့ကတော့ ပိုးကောင်လေးလဲမြင်ဘူးတဲ့ WiMax Connection ကို Base Station တစ်ခုထားပြီးတော့ လှမ်းချိတ်ထား ပုံကို Internet ကနေ ယူထားပြီးတော့ အားလုံးကြည့်လိုက်တာနဲ့နားလည်နိုင်တဲ့ပုံလေးကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
အားလုံး WiMax Connection အကြောင်းလေးကို Company တစ်ခုမှာ Project လုပ်ပေးရင်နဲ့လေ့လာဖြစ်တာဆိုတော့ ရတဲ့ဗဟုသုတ လေးကိုရေးပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးကောင်လေးတတ်နိုင်သလောက်လေးရေးပေးထားတာဖြစ်လို့ အမှားများနဲ့အခြားလိုအပ်ချက်များ ရှိရင်လဲ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။ ပိုးကောင်လေးကိုယ်တိုင်ကလဲ တစ်ကြိမ်တည်းလေ့လာဘူးတော့ အမှားဆိုတာရှိနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 35 ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂတုံးလေး, ဆန်းမောင်, ဇ၀န, ညီညီဇော်, ဒဿဂီရိ, မိုးလွင်, အမောင်, ဧပရယ်မောင်ကြီး, ကော်ဖီ, ဇေယျာအေး, မောင်သံသရာ, လေပြေညင်း, အောင်မိုးထွန်း, AZM, azp09, bonge, chitnyimalay, goldstar, heavenkoko, hightechkey, hninn nu, ko myo, kozaw.dagon, KznT, moemama2008, moe_poung, mttwin, myintsoe, naung252, nss, phoelapyaee, phyomyintthein, runner.zaw, spaceboy, tunlinaungt456
ေ၇း ထားတာ ကောင်း ပါတယ် ဒါပေမယ်. မြန်မပြည် မှာ use နေတဲ. Line တခု ကျန်ပါ သေးတယ် ။ အဲဒါ က Fiber Line ပါ ။ ပိူးကောင်း လေးေ၇ အဲ.ဒီ အကြောင်း တင် လိုက်ပါအုံး
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ qqlay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကော်ဖီ, မောင်သံသရာ, hninn nu
Find More Posts by qqlay
လေးစားပါတယ် ပိုးကောင်လေးရေ... လေ့လာမှုအားကောင်းသလို။ ပညာမျှဝေမှုအားလည်းကောင်းတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။ ချီးကျူးပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ spaceboy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဧပရယ်မောင်ကြီး, ကော်ဖီ, မောင်သံသရာ, hninn nu
Wi-Fi Connection ဆိုတာကလဲ Wireless Network Connection အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Cable Connection တွေရဲ့နေရမှာ အစားထိုးဝင်ရောက်လာတော့မည် Wireless Network Connection အမျိုးအစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Wireless Network Connection ဆိုတာက Computer တွေကို Wireကြိုးတွေနဲ့ဆက်သွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ Radio signal တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ ဆက်သွယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး Radio Signal တွေနဲ့ဆက်သွယ်အသုံးပြုရတာဆိုတော့ မိမိတို့တိုက်ခန်းအတွင်းထဲမှာဆိုရင် Desktop Computer ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Laptop Computer ကနေဖြစ်ဖြစ် ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး စနစ်ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် Wi-Fi Connection မှာလဲ IEEE ကနေ သတ်မှတ် စံသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်။ Wi-Fi Connection မှာ စံစနစ်တွေကို စုစည်းထားတဲ့ 802.11 ဆိုတာကတော့ IEEE ကနေသတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ (Wi-Fi Connection ကို 802.11 Connection လိုလဲ ခေါ်ဆိုကြပြီးတော့ 802.16 Connection ကိုတော့ WiMax Connection လို့စံသတ်မှတ်ချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ နံမည်တွေကိုမခေါ်တော့ဘဲ့ နဲ့ IEEE ရဲ့စံသတ်မှတ်ကိုပဲခေါ်ဆိုမှုတွေရှိပါတယ်။) IEEE ကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့ WiFi Connecton မှာဆိုရင် IEEE 802.11 အပါအ၀င် (၅)မျိုးရှိပါတယ်။ IEEE 802.11; 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11h; 802.11n စံအမျိုးအစားတို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့စံသတ်မှတ်ထား တဲ့အမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီးတော့လဲ အကွာအဝေးတွေကလဲကွာခြားမှုတွေရှိပါတယ်။ IEEE 802.11n ကတော့ 2008 လောက်မှပေါ်ပေါက် ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ IEEE 802.11 အမျိုးအစားတွေမှာလဲ မိမိတို့အသုံးပြုထားတဲ့အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ NOC လို့ခေါ်တဲ့ Non Over Channel (မထပ်တဲ့Channel) တွေလဲကွဲပြားမှုရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မိမိတို့အသုံးပြုမယ်အမျိုးအစားနဲ့ရနိုင်တဲ့ အကွာအဝေး၊ လျင်မြန်မှု၊ NOC တို့ကို သေချာမေးမြန်းပြီးတော့ သင့်တော်တဲ့အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်ဆက်သွယ်မှုတွေရဲ့ စိတ်မချရတဲ့ အချက်တစ်ချက်ကတော့ Physical Connection ( ADSL Braodband Connection; Broadband Wireless Local Loop Connection တို့ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။) တွေလောက်တော့ စိတ်ချလုံခြုံမှုတော့မရပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် အပိုကုန်ချမှုစရိတ်အနည်းငယ်တော့ရှိမှာပါ။ Wireless Connection မှာ လုံခြုံမှုရှိအောင်မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်တော့ မိမိတို့ရဲ့ အချက်အလက်တချို့နှင့်Networkကို အလွယ်တကူနဲ့ သူတပါးကရယူသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Wireless Network လုံခြုံမှုရှိရန်အတွက်ဆိုရင် Router ကိုလဲအသုံးပြုထားသင့်ပါတယ်။ မိမိတို့အသုံးပြုတဲ့ Router မှာလဲ Password ခံပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၀ယ်တုံးက ဆိုင်ကပေးထားတဲ့ Router Password ကိုအသုံးမပြု ဘဲနဲ့မိမိဘာသာ Password တွေပြောင်းသုံးပြီးတော့လဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Router ရဲ့ Password ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် မိမိတို့ဘာသာ ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။ Router ၀ယ်ယူထားတုံးက ပါတဲ့စာရွက်လေးကတည်းက ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်လုပ်ပြီးတော့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ SSID Name တွေဟာ အလွယ်တကူနဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်လို့ Router ကနေ SSID Name တွေကိုလဲ ၀ှက်ထားပေးနိုင်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ SSID Name တွေကို ၀ှက်ထားနိုင်ပါတယ်။ SSID Name တွေကို အများဆုံးအသုံးပြုတာကတော့ Home; Linksys တို့ peer to peer home တို့ဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီနံမည်ကိုတွေကို Router ကနေ တဆင့်ဝှက်ထားပြီးတော့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Network Connection ကိုချိတ်ဆက်တဲ့ လူတိုင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းတိုင်းကို မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Password တွေထားပြီးတော့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုသာ Router တွေ၊ Password တွေအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိတို့ Network Connection အတွက် လုံခြုံမှုကိုတော့ အနည်းငယ်ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Wireless Network ကိုအသုံးပြုတော့မယ် ဆိုရင် မိမိတို့အသုံးပြုတဲ့ Desktop Computer မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Laptop မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Network Adapter တော့ရှိဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Desktop Computer တွေအတွက်ဆိုရင် Network Adapter မပါခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ USB Wireless Adapter ကို ၀ယ်ယူအသုံးပြုရမှာဖြစ် ပါတယ်။ Laptop အားလုံးနီးပါးမှာတော့ Wireless Netowrk Adapter တွေပါတတ်ပါတယ်။ Wireless USB Adapter နဲ့ WirelessUSB Adapter တွေမှာဆိုရင် USB ခွဲရေးထားတဲ့၊မရေးထားတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့လဲ ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်မှုအကွာအဝေးနဲ့ GHz band ကလဲ နေရာအကွာအဝေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကွာခြားတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် USB Adpater ၀ယ်မယ်ဆိုရင်လဲ သေချာမေးမြန်း စုံးစမ်းပြီးတော့မှဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။ Wireless Wi-Fi Network ကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုတွေဟာလဲ မိမိတို့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Access Point သို့ Hotspots ရှိတဲ့နေရာတွေကနေ တဆင့်နေရာ အကွာအဝေးအနည်းအများကိုလိုက်ပြီးတော့ ကြိုးမဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Wi-Fi Hotspots ဆိုတာ ဘာလဲဆိုရင်တော့ Wireles Local Area Network Connection ကိုအခြေခံထားပြီးတော့ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုကိုရနိုင်တဲ့နေရာ ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ ဖုန်းတွေမှာတောင် Wi-Fi Connection ကိုအသုံးပြုနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် Wireless Connection သုံးမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့ Laptop/Desktop Computer အားလုံးကို အခန်းတစ်ခန်း သို့ အိမ်တစ်အိမ်ထဲမှာ ရွေ့ပြောင်းသွားပြီးတော့ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တောင် Network Connection က ပြတ်တောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် အခြား Cable Connection တွေထပ်စရာ ကြိုးဖိုးကုန်စရာမလိုတဲ့အပြင် အလွယ်တကူချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Wireless Network Connection ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ မိမိတို့အသုံးပြုထားတဲ့ Wireless Router အမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီးတော့ အဲဒီ Router တွေရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အကွာအဝေးအတွင်းမှာပဲ Network Connection ကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Wireless Router တွေထဲမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့အကွာအဝေးကိုကျော်သွားရင်တော့ Network ကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အောက်ကပုံလေးကတော့ Wireless Connection ကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုထားပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကနေရှာဖွေထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Wi-Fi နဲ့ WiMax Connection တို့ရဲ့အနည်းငယ်ခြားနားချက်လေးတွေက ဟိုတယ် (Trader Hotel)၊ လေဆိပ် (Yangon) တို့မှာ Wi-Fi Hotspot တွေထားပြီးတော့ အင်တာနက်နဲ့ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်အောင် အသုံးပြုထားတဲ့ Wi-Fi စနစ်ဟာအကွာအဝေး အနည်းငယ်လောက် ကနေ ချိတ်ဆက်တော့မှ ဆက်သွယ်အသုံးပြုလို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ WiMax Connection မှာဆိုရင်တော့ မိုင် (၃၀)အကွာအဝေးကနေ ဆက်သွယ်ပြီးတော့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Data Transfer rate ကလဲ Wi-Fi Connection ထက်အဆပေါင်းများစွာ ပိုပါတယ်။
Intel Company ကနေ Wi-Fi Connection နဲ့ WiMax Connection တို့ရဲ့အကွာအဝေး သက်ရောက်နှုန်းကိုပြထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံလေးကိုလဲ Internet ကနေရှာဖွေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Wireless Connection အကြောင်းကိုလဲ ပိုးကောင်လေးလေ့လာဖြစ်တာကတော့ ရန်ကုန်မှာ Password မခံထားဘဲနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ နံမည်ကြီးဟိုတယ်တစ်ခုကို အကြောင်းတိုက်ဆိုင်စွာ Project လေးတစ်ခုလုပ်ရင်းကနေ Wi-Fi Connection အကြောင်းကို အနည်းငယ် လေ့လာမိခဲ့တယ်။ အဲဒီကနေ အနည်းငယ်ဗဟုသုတရရှိခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ MICT မှာ WiFi Connection အကြောင်း Seminar တစ်ခုကို သွားနားထောင်ရင်နဲ့ IEEE 802.11 အမျိုးအစားတွေကိုသိခွင့်ရခဲ့တယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီ Connection အကြောင်းလေးကို ပိုးကောင်လေး ရရှိခဲ့တဲ့ဗဟုသုတအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အမှားများ၊ အခြားလိုအပ်ချက်များရှိပါကလဲနားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါရန်။
ဦးဦးရဲနောင်၊ ကိုspaceboy နဲ့ ကို/မ qqlay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကို/မ qqlay ပြောတဲ့ Connection ကတော့ အများဆုံးအသုံးပြုတာက . . . . တွေမှာသုံးတာလေဗျာ။ အဲဒါကြောင့် ပိုးကောင်လေး မလေ့လာဘူးသလို၊ လက်တွေ့လဲမသုံးဘူးဘူး။ အဲဒါကြောင့်မရေးဖြစ်တာပါ။ နောက်ထပ်လေ့လာဖြစ်ရင်တော့ တင်ပေးပါ့မယ်ဗျာ။
Last edited by poekaunglay87; 10-08-2009 at 07:54 AM..
ကိုကိုထွေး, ကိုဦး, ဂတုံးလေး, ဆန်းမောင်, ညီနေမင်း, ဖိုးရှမ်း, ဖယောင်း, မိုးလွင်, အမောင်, ဧပရယ်မောင်ကြီး, ကော်ဖီ, ကျော်ထက်ချိန်, ဇေယျာအေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, လေပြေညင်း, အောင်မင်းကို, အောင်မိုးထွန်း, 4kyaw, AZM, azp09, chitnyimalay, comic_, goldstar, KznT, lifemark, moemama2008, mr.kohtun, mttwin, myintsoe, phoe san, phoelapyaee, phyomyintthein, phyothuhein, sakuracherry, san lin, spaceboy, themoon49, yawnathan, Zin Ko
ကျွန်တော်ကတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ပက်သက်ပြီး အခြေခံပဲရှိပါတယ် ၊ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် ဆွဲအားကောင်းတဲ့ ဆောပ်ဝဲလ် လေးများရှိရင် မျှဝေကြပါခင်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ kyawkyaw17 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by kyawkyaw17
ပို့စ် 213 ခုအတွက် 859 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဒီနေ့မှ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ဖြစ်တယ် ကျေးဇူးပါဘဲ
မေးလည်း မမေးတတ်ဆိုတော့ ဒီပို့စ်လေးတွေကို ဖတ်ရတာဗဟုသုတအများကြီးရပါတယ်
ခုတောင် သေချာဖတ်ဖို့အချိန်မရလို့ ဆေ့ဖ်ထားလိုက်တယ်
နောက်တော့ ပြန်ဖတ်ရတာလွယ်အောင်လို့လေ အင်တာနက်သုံးနေပေမယ်သေချာကြီးမသိတာ
ပိုးကောင်လေးရှင်းပြမှ သိရတော့တယ် နောက်လည်းဒီလိုအကျိုးရှိတဲ့ပိုစ်တွေများများရေးနိုင်ပါစေ............
Last edited by phyomyintthein; 07-08-2009 at 06:11 PM.. Reason: အ၀ါရောင်ကြောင့် စာလုံးများ မမြ&#
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ moemama2008 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, hninn nu
Find More Posts by moemama2008
အကိုရေkyawkyaw7 - Connection အနှေးတယ်မြန်တယ်ဆိုတာကတော့ အကိုတို့အသုံးပြုနေတဲ့ Connection အမျိုးအစား၊ Speed အမျိုးအစားနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကွန်နက်ရှင်လိုင်းမှာ ဖုန်းလိုင်းကျပ်မကျပ်တို့နဲ့အသုံးပြုတဲ့သူများ မများပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ပိုးကောင်လေးလဲ ဆရာမဟုတ်တော့သိပ်တော့သေချာမသိပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်တာလေးတွေပြောပြထားတာပါ။ ကွန်နက်ရှင်မြန်အောင်ဆိုရင်တော့ အသုံးပြုတဲ့သူ နည်းတဲ့အချိန်နဲ့Connection Speed ကိုများများယူပြီးတော့အသုံးပြုရင်တော့ အနည်းနဲ့အများမြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကလင့်တွေ မှာတော့ ဖိုရမ်ကအကိုအမတွေ Connection Speed မြန်အောင်နဲ့ဆော့ဝဲတွေသုံးလို့ရတာကို ဆွေးနွေးထားတဲ့ပို့စ်လေး တွေရှိပါတယ်။ ၀င်ရောက်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေပြီးတော့ Connection Speed ကိုလဲအမြန်ဆုံးConnection Speed ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါစေခင်ဗျာ။
အောက်ကလင့်မှာတော့ Full Speed Internet Broadband Connection ဆိုတဲ့ Software တွေရှိပါတယ်။
Flaster ADSL Speed အကြောင်းကိုတော့ ကိုလူဖုန်းရှင်းထားတာရှိပါတယ်။
DSL Speed Software ကိုတော့ ကိုညီနေမင်းတင်ပေးထားတဲ့ ဆော့ဝဲလေးရှိပါတယ်။
Slow Connection ကိုဖြေရှင်းပေးမယ့် Protable CC Proxy v6.4.0 FULLအကြောင်းလင့်လေး
Internet speed ဘယ်လောက်နဲ့လုပ်နေသလဲ သိချင်သလား...အကြောင်းဆွေးနွေးထားတဲ့လင့်လေး
Internet Speed ကိုမြင့်ကြရအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဆွေးနွေးထားတဲ့ လင့်လေးပါ။
ခင်မေခ, ဂတုံးလေး, ဆန်းမောင်, ညီနေမင်း, ဖယောင်း, အမောင်, ဧပရယ်မောင်ကြီး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, နိုးတူး, AZM, azp09, bonge, goldstar, hninn nu, kozaw.dagon, KznT, myintsoe, phyomyintthein, spaceboy
ပို့စ် 25 ခုအတွက် 38 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကိုယ်သုံးတဲ့ကွန်ပျူတာက ဘယ်လို Internet Connection သုံးတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲ
ကိုယ်က တခြားတယောက်ဆီရောက်သွားရင် သူက ဘာနဲ့သုံးနေလဲဆိုတာကြည့်လို့ရမလားမသိဘူး
ပို့်စ်တွေ တင်ပေးထားတာလည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
[SIZE="4"][COLOR="Blue"]ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ ပန်းတိုင်ကို လျှောက်လှမ်းတဲ့အခါမှာ....................
ရှေ့ကိုလည်းသွား၊ နောက်ကိုလည်း ပြန်ကြည့်၊ မေ့နေတာရှိရင် ပြန်ယူလို့ရတာပေါ့။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Htun အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by Htun
အမ Htun ရေ-
မိမိတို့အသုံးပြုနေတဲ့ Connection ကဘာConnection လဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ ကွန်ပြူတာလေး နှစ်လုံးဆင့်ပြီးတော့ မီးလင်းလိုက်၊ မှောင်လိုက်ဖြစ်နေတာလေးကို mouse pointer လေးနဲ့ရွေ့ကြည့်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် မိမိတို့သုံးနေတဲ့ အမျိုးအစားတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထပ်ပိုပြီးသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီမီးလင်းလိုက်၊ မှောင်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ ကွန်ပြူတာနှစ်လုံးဆင့် လေးကို Right Click လုပ်ပြီးတော့ Open Network Connection ဆိုတဲ့ဟာကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် Network Connection box ကြလာပြီးတော့ မိမိတို့သုံးနေတဲ့အမျိုးအစားတွေကိုအသေးစိတ်တွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သုံးနေတဲ့ Connection အမျိုးအစားကို Dial Up နဲ့ LAN High Speed Connection ဆိုပြီးတော့ Connection Speed တွေအလိုက်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ADSL; BBWLL; WiMax တွေမှာဆိုရင်တော့ ကွန်ပြူတာလေး လင်းလိုက်၊ မှောင်လိုက်ကို Point လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Local Area Connection is now Connected နဲ့ Speed 100Mbps ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုတွေ့ရမှာပါ။ Dial Up Connection ကိုသုံးထားမယ်ဆိုရင်တော့ Bagan Net Connection is now connected နဲ့ Speed 52Kbps ဆိုတဲ့စာတန်းbox လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Wireless Connection ဆိုရင်တော့ ရှင်းပါတယ်။ သူ့မှာ ကွန်ပြူတာလေးနှစ်လုံးအပြင် Radio wave လေးတွေကို ဘယ်မှာကော၊ ညာမှာကော ပြေးနေတဲ့ ပုံလေးကို ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်နည်းကတော့ Start > Connect to > ဆိုပြီးတော့ ကြည့်လုပ်လိုက်ရင် ကိုယ့်သုံးထားတဲ့ Connection အမျိုးအစားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Show All Connection ထဲကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ Connection အပြင်အသုံးပြုထားတဲ့ Modem နဲ့ Network Adapterနံမည်လေးတွေကိုလဲအားလုံးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကွန်ပြူတာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Laptop မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Connection cable (Cat-5) လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဖုန်းကြိုးလိုမျိုး (Modem ကနေတဆင့်ဖုန်းလိုင်းကိုဆက်သွယ်ထား။) သုံးထားတာ Laptop ဆိုရင်တော့ ဘေးနဲ့နောက်၊ Desktop Computer ဆိုရင်တော့ နောက်ဘက်က Modem ကနေထွက်နေတဲ့ ကြိုးဆိုရင်တော့သေချာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Dial Up Connection ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ LAN High Speed Connection အမျိုးအစားကိုသုံးထားရင်တော့ Laptop ကော၊ Desktop ရဲ့နောက်မှာ Cable ကြိုး (အဖြူရောင်ကြိုး) လိုမျိုးကြိုးကိုတွေ့ပြီးတော့ Laptop; Desktop Computer တို့နောက်မှာ Network ခေါင်းလေးကနေ Netowrkကြိုးတစ်ချောင်းထွက်ပြီးတော့ မီးစိမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ High Speed Connection အမျိုးအစားထဲကတစ်ခုခုပါ။ Wireless Connection ဆိုရင်တော့ Laptop ရဲ့အရှေ့တွေမှာအများဆုံးပါတတ်ပါတယ်။ Antenna Radio Wave ပုံစံလေးပြထားပြီးတော့နဲ့ မီးလင်း(အပြာရောင်အသုံးများပါတယ်။)နေပြီးတော့ Desktop Computer; Laptop တွေမှာ Wireless Connection ပုံစံလေးကအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Wireless Connection ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် အမလဲ ဘယ်Connection အမျိုးအစားကို သုံးထားလဲဆိုတာ အနည်းငယ်တော့ သိသွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သေချာအတိအကျ ပိုပြီးတော့သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အသုံးပြုထားတဲ့လူကိုဖြစ်ဖြစ် မေးကြည့်လိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ အသုံးပြုထားတဲ့ Connection အမျိုးအစားကို အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာသိရှိနိုင်ပါစေ။ မှားနေတယ်ဆိုရင်တော့ခွင့်လွှတ်နားလည်သည်းခံပြီးတော့ ကြည့်ပေးကြပါ။ ပိုးကောင်လေးတတ်နိုင်သလောက်တော့ရှင်းထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
အောက်ကပုံလေးမှာတော့ Connection အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြထားတာပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 21 ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မေခ, ဆန်းမောင်, ညီညီဇော်, မိုးလွင်, အမောင်, ကျော်ထက်ချိန်, ဇေယျာအေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, AZM, bonge, chitnyimalay, goldstar, hninn nu, Htun, KznT, minthike, mttwin, soemaung, tu tu, yawnathan
ပို့စ် 235 ခုအတွက် 1,798 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ရေးထားတာတွေကို (ဥာဏ်စွမ်းရှိသ၍) မှတ်သားသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ တခြားသူတွေကိုလည်း မှတ်သားစေချင်ပါတယ်။ မြန်မာမိသားစုဝင်မဟုတ်သူတွေကိုရောပေါ့ခင်ဗျာ။ အကယ်၍ မြန်မာမိသားစုမဟုတ်တဲ့ တခြားဘလော့ တစ်နေရာမှာရေးထားရင်လည်း Link လိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မရှိရင်လည်း ကျွန်တော့်ဘလော့တစ်နေရာမှာ (ဒီကကူးယူကြောင်းပြောပြီး) ဖေါ်ပြချင်ပါတယ်။ အကြောင်းပြန်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
သရုပ်ပြပုံတွေကသေးတော့ အကြီးချဲ့ရတဲ့ အလုပ်ပိုလေးလည်း လျော့သွားအောင်။ နက်နှေးတဲ့သူတွေလည်း အဆင်ပြေသွားအောင် ရေးသမျှလေးကို pdf လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် စုဆည်းပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ တောင်းဆိုရတာများသွားလို့ အားနာပါတယ်ခင်ဗျာ။
Last edited by အမောင်; 09-08-2009 at 02:14 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ အမောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, hninn nu, minthike
Visit အမောင်'s homepage!
Find More Posts by အမောင်
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ ပိုးကောင်လေး အတတ်နိုင်ဆုံးတော့အောက်ကလင့်လေးတွေမှာ Word နှင့် PDF ဖိုင်ဆိုပြီးတော့ လုပ်ပေးထားပါတယ်။ တစ်ဖိုင်ချင်းဆီပဲတင်ပေးထားပါတယ်။ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတဲ့
အသုံးပြုတဲ့လူတွေပါအဆင်ပြေအောင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်အောင်တင်ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေစွာ ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ပါနိုင်ပါစေခင်ဗျာ။ အဆင်မပြေတာများနဲ့လိုအပ်ချက်များရှိပါကပြောထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အားလုံးကိုမျှဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကူးယူလို့ရပါတယ်။ ဖိုရမ်ရဲ့နံမည်ထည့်ပြီးတော့ ကူးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 32 ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဦး, ခင်မေခ, ဂတုံးလေး, စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, ညီနေမင်း, ဖန်နေ၀န်း, မိုးလွင်, အမောင်, ဧပရယ်မောင်ကြီး, ကျော်ထက်ချိန်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်ထက်, မောင်သံသရာ, လေပြေညင်း, bonge, chitnyimalay, goldstar, heavenkoko, hightechkey, hninn nu, ko myo, kyaukphyu, KznT, minthike, phoelapyaee, phyothuhein, spaceboy, thatpan, tu tu, yawnathan, zawnaingxxx
28-08-2009, 10:23 PM
အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ Post ပါပဲဗျာ။ အတော်ကိုဗဟုသုတ ရပါတယ်။ အခုလို စိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိချင်တာလေး တစ်ခုက အခုချိန်မှာ ဘယ် Connection အမျိုးအစားယူရင် ကောင်းမလဲလို့။ ကျွန်တော်က Wimax Connection ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ မြန်မာပြည်မှာ ADSL က အကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေတာပဲ။ အဲဒါ ADSL နဲ့ Speed ကဘယ်လိုကွာလဲ။ ၀န်ဆောင်မှုကော ကောင်းရဲ့လား။ Wimax သုံးဖူးတဲ့သူများရှိရင် ၀ိုင်းပြီးဆွေးနွေးပေးပါဦး။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ hightechkey အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဧပရယ်မောင်ကြီး, မောင်သံသရာ, hninn nu, minthike
Find More Posts by hightechkey
29-08-2009, 08:36 PM
အကိုမေးထားတဲ့အထဲက ဘယ်Connection ကအကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်တော့ မိမိတို့အသုံးပြုချင်တဲ့ကွန်နက်ရှင်အပေါ်မှာ မိမိတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချင်တဲ့အလုပ်အတိုင်းအလွယ်တကူလျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးလို့ မိမိတို့ဘာသာသတ်မှတ်ကြ မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မိမိတို့ရဲ့အသုံးပြုချင်တဲ့အပေါ်မှာ လျင်မြန်တဲ့Connection ကအကောင်းဆုံးပါ။ Connection တွေအမျိုးအမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာ ပိုးကောင်လေးအပေါ်ကပို့စ်တွေမှာပြောထားတဲ့အတိုင်း မိမိတို့အသုံးပြုချင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မူတည် ပြီးတော့ အသုံးပြုတာအကောင်းဆုံးပါ။ ဘယ်Connection ရယ်မှအကောင်းဆုံးလို့ပြောပြဖို့ဆိုတာကေ အနည်းငယ်ခက်ခဲမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ WiMax Connection ကိုစိတ်ဝင်စားတာကောင်းပါတယ်။ နောင်တချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့ Connection အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ Cable ဖိုးတွေကြောင့်အရမ်းအကုန်အကျများနေတဲ့အချိန်မှာ ကြိုးမဲ့စနစ်သုံးနိုင်တဲ့ WiMax တွေဟာ နေရာယူလာနိုင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် Red Link Company ကနေWiMax Connection ကို OutDoor Unit တစ်ခုတည်းနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Connection တွေဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ နောက်ထပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ADSL နဲ့ WiMax အကြောင်းကိုပြည့်စုံ စွာရေးပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။ (Speed ကွာခြားချက်ကိုလဲနောက်တစ်ခုမှရှင်းပြပေးပါတော့မယ်။နည်းနည်းတော့အချိန်လေးပေးယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်နည်းနည်းများတာကော၊ နေမကောင်းဖြစ်နေကြောင့်ပါ။) WiMax Connection ၀န်ဆောင်မှုအနေနဲ့ကတော့ မြန်မာဆက်သွယ်ရေး (MPT) နဲ့ Red Link က ၀န်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။ အောက်ကလင့်မှာ RedLink Company ရဲ့ဝန်ဆောင်ပေးမှုကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Connection နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုတော့ ခဏလေးစောင့်ပေးပါ အမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်အောင်တင်ပေးပါ့မယ်။
ခင်မေခ, ဂတုံးလေး, စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, နိုင်လင်းစိုး, ဧပရယ်မောင်ကြီး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, AZM, goldstar, hninn nu, minthike, mttwin, nang may zin, phyomyintthein, spaceboy, yawnathan
အကိုhightechkeyရေ - ပြန်ဖြေပေးတာ နောက်ကျတယ်ဆိုတာထပ် အရမ်းကိုနောက်ကျသွားလို့တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခုအကိုမေးထားသလိုမျိုးပဲ ပိုးကောင်လေးကို စာချွန်လွှာပို့ပြီးတော့ WiMax သုံးချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မေးထားတဲ့အကိုတွေလဲရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပြန်ဖြေပေးဖို့ နောက်ကျသွားတဲ့အကိုတွေ၊ အမတွေသည်းခံခွင့်လွှတ်ပေးကြပါခင်ဗျာ။ WiMax ကို ဘာကြောင့်သုံးချင်တာလဲဆိုတာနဲ့အခြားမိမိတို့အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်မှာသုံးတဲ့လူတွေ အဲဒီ WiMax Connection ဟာကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ရဲ့လားဆိုတာသေချာမေးမြန်းပြီးတော့မှ အဲဒီConnection ကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုသင့်တယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ရဲ့လားမေးရတာ လဲဆိုတော့ အချို့ပတ်ဝန်းကျင်နေရာတွေမှာဆိုရင် မရတတ်တာတွေဖြစ်တတ်သလို၊ Outdoor unit ပါပျက်သွားတဲ့အဆင့်အထိဖြစ်သွားနိုင်တာတွေရှိတတ်၊ ဖြစ်တတ်လို့သေချာမေးမြန်းပါ။ ကိုယ့်အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်မှာအသုံးပြုနေတဲ့လူတွေရှိရင်လဲ သုံးရတာအဆင်ပြေလား၊ လိုင်းအခြေအနေကောဘယ်လိုနေလဲ၊ စသည့်ဖြင့်မိမိတို့အတွက် အဆင်ပြေမလား၊ မပြေလားဆိုတာကို မေးမြန်းပြီးတော့ အသုံးပြုတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခုတလောမြန်မာနိုင်ငံမှာ WiMax နည်းပညာခေတ်စားလာတာနဲ့အမျှ နိုင်ငံတကာအသီးသီးမှာလဲ မြန်နှုန်းမြင့်တဲ့ ကြိုးမဲ့စနစ်ဖြစ်လို့အများဆုံးအသုံးပြုနေကျပါတယ်။ WiMax Connection ကအခုမှခေတ်စားလာတာဖြစ်လို့အသုံးပြုချင်တာလား။ ကြိုးမဲ့စနစ်ဖြစ်လို့အသုံးပြု ချင်တာလား။ အသုံးပြုသူတွေဟာသေချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်။ ADSL Connection နဲ့ဆိုရင် ဘာတွေကွာခြားလဲဆိုတော့ အပေါ်မှာ ADSL Connection အကြောင်းရှင်းပြထားပါတယ်။ WiMax Connection အကြောင်းလဲရှင်းပြထားတာဖြစ်လို့သေချာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ADSL Connecion က Cable နဲ့အသုံးပြုလို့ရနိုင်သလို။ ပိုက်ဆံလေး အများဆုံး တစ်သိန်းလောက်အကုန်ခံလိုက်ရင်လဲ ကြိုးမဲ့စနစ် Wireless အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ADSL Connection Speed နဲ့ WiMax Connection Speed ကတော့ မိမိတို့အသုံးပြုတဲ့ Speed ၊ WiMax Base Station ကနေလက်ခံနိုင်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက် စသည့်အချက်အလက် တွေ ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ကျန်နေသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေး တွေကိုထပ်ပြီးတော့ ပြောပြပေးပါ့မယ်။ အခုတော့ ပိုးကောင်လေးလဲ အချိန်နည်းနည်းအားပြီးဆိုတော့ နောက်နေ့အတတ်နိုင်ဆုံးပြောပြပေးပါ့မယ်။
ခင်မေခ, ဂတုံးလေး, စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, ညီနေမင်း, နိုင်လင်းစိုး, မမထွန်းထွန်း, ဇေယျာအေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, အောင်မိုးထွန်း, bonge, goldstar, hninn nu, ko myo, minthike, mttwin, phyomyintthein, soehtetpaing, yawnathan
အကိုရေ ... WiMax ၊ wiFi တို့ကို လိုင်းမိပြီး Password တောင်းနေလို့။ Password ဖြည်တဲ့ ဆော့ဝဲရှိလား ခင်ဗျ။
ရှိရင်လိုချင်လို့ပါ ခင်ဗျ။ ပေးဖို့ အဆင်မပြေရင်လဲ ဗဟုသုတရအောင် Password ပေးပုံပေးနည်း၊ ဆောလ်ဝဲနဲ့ ဖြည်လို့ ရ၊ မရ သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ အကို့ ပို့စ်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင် လေးစားလျှက် .....
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ AZM အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, hninn nu, honelay86, minthike
WiMax Connection နဲ့ WiFi Connection တွေကိုတော့ Password တွေတော့ခံထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မခံထားရင် အားလုံးကိုစိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရအောင်ပြုလုပ်ခွင့်ပေးထားသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာ။ အဲဒါကြောင့် အဲဒီလိုင်းတွေကို အသုံးပြုတွေဟာဆိုရင် မိမိတို့ရဲ့ Connection ကိုအခြားသူတွေအလွယ်တကူနဲ့အသုံးမပြုနိုင်အောင် အရင်ကအသုံးပြုထား Encryption တွေကိုလဲ WEP (Wired Equivalent Privacy)၊ WPA (WiFi Protected Access) တို့ WPA2တို့စသည်ဖြင့်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိအောင် ကာကွယ်ထားနေကြပါတယ်။ ပိုးကောင်လေးဆီမှာတော့ Password Hack တဲ့ Software မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ Password ပေးပုံပေးနည်းကတော့ အောက်ကလင့်လေးမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Password ဖြည့်တဲ့ Software တွေတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ ရ၊ မရဆိုတာတော့ ပိုးကောင်လေးလဲမစမ်းကြည့်ရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ အရမ်းတော်တဲ့ Hacker တွေဆိုရင်တော့ ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို မိမိပစ္စည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့လှမ်းချိတ်ပါက Password တွေတောင်းတာတို့နဲ့အခြားလုံခြုံမှုတွေကိုလဲ အများဆုံးပြုလုပ်ထားပါတယ်။ အပေါ်က WiFi Connection အကြောင်းမှာ သေချာရှင်းပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ အောက်ကလင့်မှာတော့ Software တွေနဲ့ အခြားhacking အကြောင်းအနည်းငယ်ရဲ့လင့်ကိုပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ (အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့ ဖတ်ရှုလေ့လာကြည့်ပါခင်ဗျာ။)
အခုလိုမျိုးအားပေးလို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပိုးကောင်လေးလဲအလုပ်နည်းနည်းများနေလို့ Wireless Password hack အကြောင်းကိုသေချာတော့မလေ့လာဖြစ်သေးလို့ပါ။ လေ့လာဖြစ်ရင်တော့ ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ။ Google Serach ကနေပြီးတော့ WEP; WAP key hack ဆိုပြီးတော့ ရှာပြီးတော့လဲလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အကိုမေးထားတာနဲ့ဖြေထားတာ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
Last edited by poekaunglay87; 09-09-2009 at 10:18 PM..
ခင်မေခ, ဂတုံးလေး, ဆန်းမောင်, ဇေယျာအေး, မောင်သံသရာ, AZM, azp09, bonge, goldstar, hninn nu, honelay86, minthike, mttwin, yawnathan
WiMax Connection အကြောင်းအနည်းငယ်ထက်ပြီးတော့ပြောပြထားလိုက်ပါတယ်။ ပိုပြီးပြည့်စုံအောင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံးလေ့လာပြီးတော့ ပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အမှားများနဲ့အယူအဆလွဲတာတွေလဲရှိရင်သည်းခံခွင့်လွှတ်ပေးကြပါခင်ဗျာ။ WiMax Connection ဆိုတာ အပေါ်မှာပြောထားသလို သူ့ရဲ့ပုံစံက Base to many ပုံစံနဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်ဆုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် WiMax Connection အကြောင်းကို Presentation တွေ၊ e-Book တွေမှာတော့ PMP နည်းပညာလို့ပြောထားကြတာတွေရှိပါတယ်။ PMP နည်းပညာဆိုတာ ကတော့ Point to Multipoint ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ PMP ကိုအရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Single Point ရဲ့မူလ (Base Station တစ်ခုကနေအသုံးပြုသူတွေအားလုံးကို Connection ကိုဖြန့်ဝေပေးဆောင်နိုင်တဲ့) Signal Network တွေကနေ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထက်မက အခြားသောသူအမြောက်အများကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း၊ တစ်ချိန်တည်း၊ နေရာဒေသပတ်ဝန်းကျင်မီတာအနည်းငယ် သို့မဟုတ် မီတာအကွာအဝေးနည်းနည်းများတဲ့နေရာကနေ လှမ်းချိတ်ပြီးတော့ ဆက်သွယ်အသုံးပြုနိုင်အောင် အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ နည်းပညာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Connection အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် WiMax Connection မှာ PHY Layer လို့ခေါ်တဲ့ (Physical Layer) နဲ့ MAC Layer (Media Access Control Layer) တို့နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ နောက်နေ့မှပဲအဲဒီအကြောင်းကို သိသလောက်နည်းနည်းရှယ်ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ။ အခုတော့ ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲခဏရပ်ထားပါရစေ။ ပို့စ်များလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် တစ်ပိုင်းချင်းစီ ရှင်းနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ တကယ်ကိုအလုပ်နည်းနည်းများပြီးတော့မအားဖြစ်နေလို့ နည်းနည်းချင်းစီပဲတင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Last edited by poekaunglay87; 09-09-2009 at 10:34 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မေခ, ဂတုံးလေး, ဆန်းမောင်, ဇေယျာအေး, မောင်သံသရာ, bonge, goldstar, hninn nu, honelay86, htikewailinn, minthike, mttwin, yawnathan
ပို့စ် 23 ခုအတွက် 76 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ထိုင်းဖုန်ကအင်တာနက်ရှိနေပါတယ်..အဲဒီဖုန်းကတစ်ဆင့်ခံပြီးPC or Laptop မှာသွယ်ပြီသုံးချင်ပါတယ်..
Last edited by ဇေယျာအေး; 21-09-2009 at 07:07 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ဇေယျာအေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, hninn nu, honelay86
Find More Posts by ဇေယျာအေး
ပိုးကောင်လေးက မြန်မာနိုင်ငံကဆိုတော့ ထိုင်းConnection အကြောင်းတော့ သိပ်မသိဘူးဗျ။ ဒါပေမယ့် ဖိုရမ်မှာ ထိုင်းကအကိုတွေ၊အမတွေရှိပါတယ်။ သူတို့ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ ခဏလေးတော့စောင့်ပါခင်ဗျာ။
အခုတော့ မိသားစုဝင်ထဲက ကိုညီနေမင်းရဲ့ဆိုဒ်ကနေ ပိုးကောင်လေး လင့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကိုညီနေမင်းကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ထပ်လင့်တွေရှိရင်လဲ ပိုးကောင်းလေးတွေ့ရင်တင်ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ။
ခင်မေခ, ဆန်းမောင်, ညီနေမင်း, ဇေယျာအေး, မောင်သံသရာ, hninn nu, honelay86, minthike
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဇေယျာအေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မေးလ် ထဲကိုပါ ထပ်ပို့ပေးတဲ့ အတွက် ကိုပိုးကောင်လေး ကို ပိုပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်က တောသားမလို့ပါ
မြန်မာမှာနေတုန်းက ကွန်ပျုတာဆိုတာတောင် နည်းနည်းပဲ သုံးဖူးတာ အင်တာနက်ဆိုတာ ဘာမှန်း တကယ်ကို မသိတာပါဗျာ
အဲဒါဆိုတော့ ဘာမှ မသိဘူးလေ
ကိုပိုးကောင်လေးတို့လို ရေးတဲ့ သူကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သိရအောင်လုပ်ပေးတာကိုးဗျာ ကြားဆရာတော့ မဟုတ်တဲ့ ဖတ်ဆ၇ာပေ့ါဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ချစ်ဝေယံ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ချစ်ဝေယံ
ကိုပိုးကောင်လေး နဲ့ မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျာ
ကျနော် သိချင်တာလေး ရှိလို့ ဒီမှာပဲမေးလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်လဲ လိုက်ဖက်တာ ဘယ်လို့မှ မတွေ့လို့ပါဗျာ။ မူရင်းဆိုဒ်မှာလဲမတွေ့မိလို့ပါဗျာ။ အားရင်ဖြေပေးပါဦး
ယူထားတာက Dial Up Connection ပါ။ Bagan Cybertech Teleport။ Access Kit ကို နာရီနဲ့ ၀ယ်ပြီး သုံးပါတယ်။ နာရီ ၆၀ ကဒ်ဖြစ်ပါမယ်။ ကဒ်ကုန်မကုန် နာရီဘယ်လောက် ကျန်မကျန် သိလို့ ရနိုင်ပါသလား ? နောက်ပီး ကျနော် သိချင်တာက အဲဒီလိုင်းနဲ့ ယူထားတဲ့ IP Address က ခဏခဏ ပြောင်းသွားတတ်သလား။ IP နေရာမှာ Auto ဖြည့်ခဲ့လို့ Auto ခဏခဏ ပြောင်းနေတာလား ? IP တွေ ခဏခဏ ချိန်းသွားတာကို သတိထားမိနေလို့ပါ။ အဲဒီလိုင်းတွေ အားလုံး အဲလိုပဲ IP တွေ Auto ချိန်းကြတာလား လိုင်းတူတဲသူတွေက ဖြေပေးပါဦးနော်
နောက်တစ်ခုကတော့ Fiber Optic လိုင်းတွေ တကယ်အပြင်မှာ ချပေးနေပြီလား ? ဘယ်လိုတွေ ပေးမှာလဲ ? မကွေးရော ပါမယ်လို့ ကြားမိသေးလားဗျ အဲဒီ Fiber Optic လေးဘယ်လိုပေးမယ်ဆိုတာလေးပါ သိသလောက်လေး ပြောပေးပါဦး။ မျှော်တာမျှော် ပေါ်မလာသေးလို့ အင်တာနက် ကသတင်းတွေထက် လက်တွေ့ သုံးနေတဲ့သူတွေကိုမေးလိုက်ရတာ ပိုတိကျမယ်ထင်လို့ပါ
ကြုံတုန်းလေး မေးလိုက်တာ များသွားလားပဲ အားကိုးပါတယ် ဖြေပေးကြပါဦးဗျာ ...
ကိုပိုးကောင်လေး လဲ တော်တော်ကြီးကို ဆွေးနွေးထားတာတွေ့လို့ လေးစားဂုဏ်ယူ ကျေးဇူး အထူးတင်ပါကြောင်း
ကိုပိုးကောင်လေး နဲ့ မိသားစုဝင်များ အားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင် အောင်မြင်ကြပါစေ ....
Last edited by bonge; 16-01-2010 at 03:28 AM.. Reason: စာထပ်ဖြည့်
ခင်မေခ, ဂတုံးလေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, goldstar, hninn nu, honelay86, minthike, yawnathan, Ye Aung
fiber to home ဆိုပြီးအစီအစဉ်တွေဆွဲနေတဲ့အကြောင်းကိုတော့..ရတနာပုံတယ်လီပေါ့ပွဲမှာကြားခဲ့ရတယ်ဗျ...ဒါပေမယ်ကြားဦးမယ်ထင်တယ်သူတို့ပြောပုံအရတော့ သူကရတနာပုံနဲ့ အနီးကပ်ဆုံးမြို့တွေကို အရင်ပေးမယ် ဥပမာ မန္တလေးတို့ ..မေမြို့တို့ပေါ့ဗျာ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ သူက တစ်မြို့ကို ဖိုင်ဘာတစ်လိုင်းဆွဲမယ် ပြိးမှ အဲဒီလိုင်းကနေ ယူမယ့်အိမ်တွေကို လိုင်းတွေထက်ခွဲပေးမယ်ပေါ့ဗျာအဲလို...ဒါပေမယ့်ဗျ..အဲဒီ ပရောဂျက်အခုမှလုပ်တုံးဆိုတော့ ကြာဦးမှာပါဗျာ..ပြီးတော့ဈေးလည်းတော်တော်ကြီးမယ်ထင်တယ်. ဖိုင်ဘာကြိုးဖိုးကိုက နည်းမှာမဟုတ်ဘူးဗျ.....
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ ခင်မောင်ထွန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မေခ, မောင်သံသရာ, အောင်လွင်ဦး, azp09, bonge, hninn nu, honelay86
16-01-2010, 04:13 PM
ကိုbonge ရေ- မင်္ဂလာပင်ပါခင်ဗျာ။
အကိုသိချင်တာလေးတွေကို ပိုးကောင်လေးသိသလောက်အတတ်နိုင်ဆုံးပြန်ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အကိုယူထားတာက Dial Up Connection (ဒီနေရာမှာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြချင်တာက Access kit တွေကို အပြင်မှာ လူအများသုံးဖို့ရောင်းချတာကတော့ Bagan Net ကပဲရောင်းချပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ MyanTel နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ ISP Name နေရာမှာ BaganNet အစား MyanTel တွေ နဲ့ပြောင်းလဲသုံးနေကြတာတွေလဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။) ကို Access Kit နဲ့ဝယ်သုံးတယ်။ အဲဒီကဒ်ကုန်၊ မကုန်ကို သိချင်ရင် သိလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒီကဒ်ကုန်မကုန်ကို Dial Up Timer ဆိုတဲ့ Software ကို အသုံးပြုပြီးတော့ လေ့လာလို့ရပါတယ်။ ကဒ်ထဲမှာ မိနစ် ဘယ်လောက်ကျန်သေးတယ်။ ဘယ်လောက် သုံးပြီးသွားပြီးဆိုတာကို တွက်ချက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒီအကြောင်းကို အောက်ကလင့် မှာ တချက်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ Softwareလင့်ကတော့ သေနေပါတယ်။ သားဆီမှာလဲ အဲဒီSoftware ကမရှိဘူးဖြစ်နေလို့။ အခြားဆိုဒ်တွေ ကနေ ယူလို့ရအောင်လဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုတည်ကြည်ရှင်းထားတဲ့ Dial up Timer Software အကြောင်း
Dialup Timer Software
အောက်ကလင့်မှာလဲ itmen ရှင်းပြထားတာလေးရှိပါတယ်။ လိုက်ရှာရင်းနဲ့တွေ့လိုက်လို့ပါ။ ဒေါင်းလုပ်လင့်တွေလဲကောင်းပါသေးတယ်။
နောက်တစ်ခုမေးထားတာက IP Address ပြောင်းတတ်လားဆိုတော့ Auto ထားမယ်ဆိုရင်တော့ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့မပြောင်းလဲတာများပါတယ်။ Auto မထားဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပြောင်းလဲပြီးတော့လဲDial Up Connection အသုံးပြုတဲ့လူတွေကသာ Proxy server က IP Address ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုတတ်တာတွေလဲရှိပါတယ်။ သူတို့ဘာလို့အသုံးပြုလဲဆိုတော့ ဥပမာဗျာ - ကွန်နက်ရှင်နည်းနည်းလေးနှေးတာနဲ့ အင်းဒီIP လိုင်းကမကောင်းဘူးထင်တယ်။ အခြားလိုင်းပြောင်းသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ IP Address ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုကြတယ်။ ပုံသေ Bagan ကပေးထားတာကတော့ IP Address က 203.81.71.73 (Port 8080) သို့ 203.81.71.69 (Port 8080) အဲဒီလိုပေးထားတာပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ IP Address ကို cache-dil.bagan.net.mm (Port 8080) လဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ သူ့ပေးထားတာကိုက IP Adress က သုံးခုလောက်ရှိပါတယ်။ Bagan ရဲ့ server ကြီးကတော့ IP Address ကိုလိုက်မပြောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ အများဆုံးကတော့ 73 ကိုအသုံးများကြပါတယ်။ အဲဒီ IP Address နေရာမှာအခြား 73တို့ 69 တို့နေရာမှာ 80;75 တို့အစရှိသည်ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်မေးထားတဲ့အထဲမှာ Auto ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ Bagan ကနေ အဆင်ပြေတဲ့လိုင်းကိုသုံးရတဲ့လူတွေအလျင်အမြန်သုံးနိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ အပေါ်က ip address တွေလောက်သာပြောင်းလဲတာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး IP တွေ Auto ချိန်းလားဆိုတော့ လူအနည်းငယ်လောက်သာ Auto ထားကြပါတယ်။ အခြားအနည်ငယ်ကတော့ 203.81.71.75 ကိုထည့်ရိုက်ပြီးတော့အသုံးပြုကြ ပါတယ်။
နောက်ထပ်မေးထားတာက Fiber Optic လိုင်းတွေကိစ္စမေးထားတာပါ။ အပြင်မှာတကယ်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု ရတနာပုံ ICT Show မှာ တရားဝင်ကြေငြာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခုတော့ရတနာပုံမှာ Fiber လိုင်းကိုအသုံးပြုနေပါတယ်။ ကိုခင်မောင်ထွန်းလဲဝင် ရောက်ဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုခင်မောင်ထွန်း။ လိုင်းကတော့အသေအချာလုပ်ဖြစ်မယ်ပါ့မယ်ခင်ဗျာ။ အားလုံးကြိုးစားပြီးတော့ အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ မကြာမီလာပါ့တော့မယ်ခင်ဗျာ။ ဈေးကတော့တော်တော်လေး(တော်တော်လေး)ကို ကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာ ဘယ်နေရာမှာမဆိုအသုံးပြုနိုင်အောင်စီစဉ်ထားတဲ့လိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ fiber Line ကိုတော့ ပိုးကောင်လေးမသုံးဘူးလို့သိပ်တော့မသိသေးဘူးခင်ဗျာ။ စာတွေပဲဖတ်ဘူးပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုbonge ကိုလဲကျေးဇူးအထူးပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆုတောင်းပေးထားတဲ့အတိုင်းပြည့်ရပါစေလို၏။ (လိုအပ်ချက်များရှိပါကသည်းခံကြပါရန်။ နောက်ထပ်လဲ Fiber အကြောင်းဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားကွန်နက်ရှင်များအကြောင်းကိုသိသလောက်လေးပြန်ရှယ်ပါ့မယ်ခင်ဗျာ။)
ကိုဦး, ခင်မေခ, ခင်မောင်ထွန်း, ဂတုံးလေး, ဆန်းမောင်, နိုင်လင်းစိုး, မင်းခကို, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်ထက်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, AZM, bonge, chitnyimalay, goldstar, hninn nu, honelay86, htikewailinn, kyaukphyu, minthike, soehtetpaing, yawnathan